New Year လဲရှိတယ်..
ကဲ...ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်ကလေးကို ကြိုလိုက်ကြရအောင်
Happy New Year ပါသူငယ်ချင်းအားလုံးတို့
Posted by Cameron at 03:063comments:
Posted by Cameron at 22:20 8 comments:
Posted by Cameron at 23:163comments:
I'm looking outside its cold
makes me want someone to hold
Bringing back memories of you
why can't my wish just come true
I don't need furs or rings
None of those fancy things
Santa, I've been really nice
Naughty? Um..just once, not twice
I hope he'll be bring me you...!!!
Posted by Cameron at 03:35 1 comment:
ငယ်ငယ်က ကျွန်မတို့ရွာနားမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနေတဲ့ ရွာတော်တော်များများရှိတယ်...။ ကျွန်မတို့တာလေရွာနားက အဲဒီချိန်က ကချင်(၅)တပ်ရင်းရှိခဲ့တယ်လေ..။ အဲဒီတပ်က စစ်ထွက် ရဲဘော်ဟောင်းတွေ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးညာတိတွေက သီရိရွာဆိုတဲ့ ကချင်ရွာလေးမှာနေထိုင်ကြပါတယ်...။ ရှမ်းပြည်ဆိုတော့ တစ်ဝမ်းတစ်ခါးအတွက် တောင်ယာပဲ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါတယ်...။ နောက် ရှမ်းခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ နေထိုင်တဲ့ရွာတွေရှိတယ်...။ အများအားဖြင့်တော့ အခါရွာ၊ လားဟူရွာတွေများတယ်..။ သူတို့တွေအားလုံး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေချည်းပဲ...။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်သွားတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေ အများစုက အနာကြီးရောဂါသည်တွေဖြစ်တာများတယ်..။ သူတို့က ဒီယေရှုသခင်ဟာ အနာကြီးရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးနိုင်စွမ်းတယ်လို့ ယုံကြည်သက်ဝင်ပြီး RC ဆိ်ုလဲ RC အလျောက်...နှစ်ခြင်းလဲ နှစ်ခြင်းအလျောက်ဝင်ကြပါတယ်....။
ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေက အခါ၊ လားဟူ၊ ကချင် လူမျိုးစုံရှိတော့... ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ဆိုရင် သူတို့ဆီအိမ်တွေမှာ ထမင်းစားဖိတ်တတ်ကြပါတယ်...။ ကချင်ရွာက အစ်မ Mကော့ရှောင်ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင် သစ်သားဆုံအကြီးကြီးမှာ ခေါပုတ်ထောင်းကျွေးခဲ့တာ...။ ခေါပုတ်ပူပူနွေးနွေးကို အဲဒီတစ်ခါပဲ ပထမဦးဆုံးစားဖူးတာ.. သိပ်စားကောင်းတာပဲ...။ နောက်အခါရွာက သူငယ်ချင်းဆီကို စက်ဘီးလေးနဲ့ သွားကြတုန်းကဆိုရင် သူတို့က ထမင်းဟင်းကို ချက်မထားဘူး ဧည့်သည်ရောက်မှ ပူပူလေးချက်ကျွေးတာ...။ ဟိုရောက်တော့ မုန်လာရွက်စွပ်ပြုတ်နဲ့ ငရုတ်သီးထောင်းကျွေးပါတယ်..။ မီးဖိုချောင်အပေါ်မှာ ကျပ်တိုက်ထားတဲ့ အသားကို ရေနွေးဆူဆူမှာ ခုတ်ပြီးပစ်ထည့် မုန်လာရွက်ခတ်ပြီး ပူပူလေးထမင်းနဲ့စားကြတယ် ငရုတ်သီးထောင်းကလဲ စပ်စပ်နဲ့ဆိုတော့ အေးခိုက်နေတဲ့ ဒီဇင်ဘာလအတွက် တကယ်မြိန်တဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေးပါပဲ..။ အဲဒီကျပ်တိုက်ထားတဲ့ အသားဆိုတာ ခွေးသားတွေပါ..။ ကျွန်မတစ်သက်မှာ အဲဒီတစ်ခါလေးပဲ ခွေးသားကိုစားဖူးတာပါ...။ အခါလူမျိုးတွေဟာ ခွေးသားကိုစားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်တဲ့နည်းတစ်နည်းပါပဲ..။ ခွေးသားစားရင်ပူတယ်လို့ ပြောကြတယ်...။ ကျွန်မစားတုန်းကတော့ ပူမပူ ငယ်သေးတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး...။
ညဘက်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရွာဘက်မှာ ကချင်ရွာကရော..တခြား အခါ၊ ရှမ်း၊ လားဟူရွာတွေကပါ Carol Singing လာဆိုကြပါတယ်...။ “ဒီအိမ်ပေါ်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာရောက်ပါစေ” ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းသီချင်းလေးနဲ့ စပြီးဆိုကြပါတယ်...။ ပြီးရင် Christmas သီချင်းနှစ်ပုဒ်သုံးပုဒ်လောက်ဆိုပြီးတာနဲ့ “ကျေးဇူးတင်ပါသည်”ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ပိတ်လေ့ရှိပါတယ်...။ အဲဒီအခါမှာဆို အိမ်ရှင်တွေက သီချင်းလာဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကို ဆုငွေတွေ ချီးမြှင့်ပေးနိုင်သလို မုန့်၊ ကော်ဖီ၊ သကြားလုံးစသဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံပါသေးတယ်...။
ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းကိုတော့ အပေါ်ယံလေးလောက်ပဲ ကျွန်မနားလည်တာပါ...။ ကျွန်မငယ်ငယ်က ရွာမှာကြုံဆုံဖူးခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးကိုပြန်နွှေးတဲ့သဘောပါပဲဗျာ...။ အမှားအယွင်းရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ..။
Posted by Cameron at 02:463comments:
Last Christmas သီချင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တော်တော်ကြာကြာတုန်းက MTVမှာ George Michael (WHOM)သီဆိုခဲ့တာ ကျမကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်...။ မူရင်းအဆိုရှင်နဲ့ တေးရေးဆရာကလဲ George Michael ပါပဲ..။
ကျမ ဒီ 2009 Christmas သီချင်းလေးဝယ်နားထောင်တော့ Last Christmas ကို Version အသစ်နဲ့ Billie Piper ကပြန်ဆိုထားပါတယ်...။
ဒီသီချင်းလေးကို မူရင်းအဆိုရှင် George Michael အပြင် ပြန်ဆိုသူတွေတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်..။ Taylor Swift, Cascade, Ashley Ti dale, Jimmy eat world, Glee, Hillary Duff, Carrie underworld တို့ဖြစ်ကြပါတယ်..။ ခုခေတ်လောလောလတ်လတ်မှာတော့ Top Ten မှာဝင်နေတဲ့ Country အဆိုတော်သစ်ကလေးဖြစ်တဲ့ Taylor Swift ဆိုတဲ့ချာတိတ်မလေးကလဲ ကန်းထရီးစတိုင်နဲ့ပဲ ဒီသီချင်းလေးကို ဆိုထားမယ်ထင်ပါတယ်...။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်တုန်းကတော့ Techno ပုံစံလေးနဲ့ ပြန်ဆိုထားတာတော့ နားထောင်ဖူးတယ်ဗျ...။ ဘယ်လိုပဲ Version ပြောင်းပြောင်း မူလသီချင်းသံစဉ်နဲ့စာသားက ကောင်းပြီးသားမို့ နားထောင်ကောင်းနေပါတယ်...။ မြန်မာလို သီရိဂျေမောင်မောင်က “အိပ်မက်၃၁” ဆိ်ုပြီးပြန်ဆိုထားတာလဲ နားထောင်းလို့ကောင်းပါတယ်...။ မြန်မာသီချင်းမှာတော့ ဒီဇင်ဘာ(၃၁) ရက်ကုန်လွန်လို့ နောက်တစ်နှစ်ကူးတော့မယ့်အကြောင်းလေးကိုပဲ အလွမ်းဖွဲ့လေးနဲ့ရေးထားတာပါ...။
ဒီ Last Christmas မှာကျတော့ စာသားအဓိပ္ပါယ်လေးက ပြီးခဲ့တဲ့ ခရစ်စမတ်မှာ တစ်စုံတစ်ဦးထံ သူ့အသဲနှလုံးကို အပ်နှံထားခဲ့လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းလေးကိုပဲ လွမ်းစရာလေးနဲ့ လှလှပပ သီဖွဲ့စပ်ဆိုထားတာပါ..။ George Michael ကနေ ဒီဘက်နေ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်လေးတွေအထိ ဒီသီချင်းလေးက ရေစီးကြောင်းထဲ မျောပါနေဆဲပါပဲ....။
Christmas သီချင်းတော်တော်များများကို နားထောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။ အထင်ကရသီချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Sliver Bell, Silence Night, Holy Night, White Christmas တို့ပေါ့...။ တချို့ကလဲ Jingle Bell မပါရင် Christmas ကမပြည့်စုံဘူးလို့ဆိုပြန်တယ်....။ Last Christmas ကိုရွေးချယ်ရေးလိုက်ရတာကတော့ သီချင်းရဲ့သံစဉ်ရော စာသားပါကြိုက်နှစ်သက်လို့ပါ....။
ကဲ....ဘလော့ဂ်မောင်နှမအားလုံးကိုရော... စာလာဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျ...
Merry Christmas & Happy New Year ပါ.....
Posted by Cameron at 04:36 1 comment:
u တို့ဆီမှာ ဘယ်လောက်တောင် အေးခဲတုန်ခိုက်နေသလဲဆိုတာ u ပို့ပေးတဲ့ ဓါတ်ပုံကိုကြည့်တာနဲ့တင် ကျောထဲစိမ့်သွားခဲ့တယ်..။ ကောင်းကင်ဆီက ၀ါဂွမ်းစိုင်တွေကြွေကျလာသလား...။ နှင်းပွင့် နှင်းဖတ်ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေးတွေက မိုးရွာချလိုက်သလို u ထိုင်တဲ့ အုတ်ဘောင်အောက်ခြေမှာ၊ u နောက်ကျောဆီမှာ၊ u ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ နှင်းပုံတွေ...နှင်းပုံတွေ..ဖွေးလို့..။ အနွေးထည်ထူထူပွပွ ၀တ်ထားတာတောင် u ကြည့်ရတာ အေးနေဦးမယ့်ပုံပဲ..။ ဒီလိုရာသီမျိုးမှာ ကျောင်းစောစောသွားရမှာ u တော့ အိပ်ယာထဲက ထချင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်..။ စာမေးပွဲကလဲ ဒီလိ်ုရာသီကျမှတွေ ဆက်တိုင်ဖြေရမယ့်အချိန်...။
ပြီးတော့ u အခန်းထဲမှာ u အိပ်ရတဲ့နေရာက heater နဲ့ တည့်တည့်ဆိုတော့ ခုလိုအေးစိမ့်ချမ်းမြတဲ့ရာသီမှာတော့ အတော်ကိုနွေးထွေးမှာပါပဲ..။ နွေရောက်ရင်သာမစားသာမှာ..။ u ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ရင်း ဒီလိုနှင်းခဲတွေကို ကိုင်ကြည့်ဖူးချင်လိုက်တာလို့ u ကိုပြောပြတော့ ကိုယ့်ကို ကိုးရီးယားသွားလည်ပေါ့တဲ့ u က...။ ဟင့်အင်း...ကိုယ်....ကိုးရီးယားထက် u နဲ့မြစ်ကြီးနား သွားလည်တဲ့အခါ ကံကောင်းရင် ခါကာဘိုရာဇီက နှင်းခဲတွေကို မကိုင်ကြည့်ရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ ...မဟုတ်ဘူးလား..။
တကယ်တမ်း u က နှင်းတွေနဲ့တူတယ် u ရဲ့...။ u စိတ်တွေက နှင်းတွေလို အဖြူထည်သက်သက်ပဲ..။ u အမူအကျင့်တွေကလဲ နှင်းတွေလိုပဲ အေးစက်စက်နဲ့လေ..။ ကိုယ်ကတော့ အပြင်မှာမမြင်ဖူးသေးတဲ့ နှင်းကို စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီး လွမ်းတတ်သူပေါ့...။ ပြီးတော့ နွေဦးမှာ တွန်မြည်တတ်တဲ့ ဥသြငှက်ငယ်လဲဖြစ်သေးတယ်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ အဝေးဆုံးတစ်နေရာမှာ တိုင်းပြည်တာဝန်...ကိုယ့်တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရင်း u ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေလိမ့်မယ်လို့ ကိုယ်ယုံကြည်ပါတယ်...၀င်ရိုးစွန်းက...နှင်း.....ရယ်.....။
ကြိုပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်....နှင်း...Merry Christmas & Happy New Year နော်.....
Posted by Cameron at 21:372comments:
လှပတဲ့ ထင်းရှူးတော အစီအရီ
ဒီ ကလေးလေး ရောက်လာခဲ့တယ်...။
နှုတ်ချိုချိုနဲ့ ဟာသယဥာဏ်တွေ ကွန့်မြူးနေလေရဲ့....။
23.12.09 မှာကျရောက်မယ့် ဟန်နီလေးမွေးနေ့အတွက် ကဗျာလေးပါ...။ သမီး မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ....။
“ဟန်နီ”ဆိုတာ လူမှုရေးခေါင်းစဉ်အောက်က “ကျမ၏ပျားရည်စက်ကလေး”ထဲက ကလေးပါ....
Posted by Cameron at 02:435comments:
ချစ်ခြင်းရဲ့ သံစဉ်တွေ သီဆိုစေခဲ့သူပါ....။
Posted by Cameron at 21:327comments:
နှင်းဖွဲဖွဲအောက်တွင် ရှင်နှင့်ကျမ မြစ်ကူးပေါင်းမိုးတံတားကြီးပေါ်မှာ အတူလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြသော ဇန်န၀ါရီနံနက်ခင်းတစ်ခုကို သတိရမိသည်..။ အပေါ်ယံမှာ ရေခဲနေတသာမြစ်ကို တံတားအုတ် လက်ရန်းဘောင်မှာ ငုံ့ကြည့်ရင်း အဲသည် ရေခဲလွှာပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ချင်စိတ်ဖြင့် အသည်းယား နေသော ကျမကို ရှင်ရယ်မောခဲ့ပါသည်..။
“အဲဒီရေခဲလွှာက ပါးပါးလေးကွ၊ မင်းကိုယ်အလေးချိန်ကိုမခံ နိုင်သေးဘူး၊ အဲဒီပေါ်မင်းမတ်တတ်ရပ်လိုက်တာနဲ့ ရေခဲလွှာလေးကွဲအက်ပြီး မင်းတစ်ကိုယ်လုံးရေခဲရေထဲ နစ်သွားမှာပေါ့”
ဘာကြောင့်များ ကျမရှင်နှင့် အတိုက်အခံလုပ်ခဲ့မှန်းမသိပါ။ အဲသည်စကားကိုပြောခဲ့တုန်းက ကျမပြုံးစစမျက်နှာပေး ရှိနေခဲ့လိမ့်မည်ဆိုတာတော့ သေချာပါသည်။ သို့သော် ရှင်ကတော့ ကျမစ နောက်လိုက်သည်ဟု ခံစားမိပုံမပေါ်ခဲ့ပါ။
ရှင်၏ ခပ်တည်တည် မျက်နှာထားက ကျမ၏ မခံချင်စိတ်ကိုဆွပေးလိုက်သလိုရှိသည်။
တကယ်တော့ မြစ်ကမ်းဘေးက ထိုင်ခုံတန်းလျားလေးမှာပဲ ကျမတို့နှစ်ယောက် အတူထိုင်ခဲ့ကြဖို့ကောင်းသည်။ ထိုင်ခံပျဉ်ခင်းပေါ်မှာ နှင်းရေဖြင့် စိုရွှဲနေစေဦးတော့၊ ကျမကသာထိုင်ချင်သည်ဆိုလျှင် ရှင်က အပေါ်ဝတ်နှင်းကာအင်္ကျီကိုချွတ်ပြီး ခုံပေါ်မှာဖြန့်ခင်းထားပေးကောင်းပေးလိမ့်မည်။ ပြီးဆုံးသွားခဲ့သော ကာလများ၏ တကယ်မပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့သော အကြောင့်အရာကို “အကယ်၍”ဆိုသောစကားလုံးဖြင့် ပြန်လည် မှန်းဆကြည့်ရတာ ရင်နာစရာကောင်းပါသည်။
မြစ်ကမ်းဘေး မြက်ခြောက်အစပ်မှာ မတ်တတ်ရပ်ရင်း ကျမ၏ ခြေတစ်ဖက်ကို မြစ်အပေါ်ယံ ရေခဲလွှာပြင်ပေါ်သို့မရဲတရဲချကြည့်လိုက်ချိန်တွင် ရှင်သည် လက်နှစ်ဘက်တင်းတင်းပိုက်ကာ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ စောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။ ရှင့်မျက်နှာထားကို ကျမ မကြိုက်ပါ။ ကလေးဆိုးတစ်ယောက်ကို မှတ်လောက်သားလောက် ဒုက္ခတွေ့စမ်းပါစေ...ဟူသော မျက်နှာထားမျိုးဖြစ်သည်။ အလိုလိုက်သော မောင်တစ်ယောက်၏ ချစ်မြတ်နိုးစွာ အလျှော့ပေးလိုက်သော၊ ဒုက္ခဖြစ်လျှင်တော့ ကယ်တင်နိုင်ရန် အဆင်သင့်စောင့်နေသော အပြုံးမျိုးရှင်ဘာကြောင့် မပြုံးနိုင်ခဲ့ရတာလဲ။ ကျမရေမကူးတတ်မှန်းလည်း ရှင်ကောင်းကောင်းသိခဲ့သည်။ ဤမြစ်သည် လူ့အရပ်သုံးပြန်စာလောက နက်ရှိုင်းသည်ဟုလည်း မကြာမီကပဲ ရှင်ပြောထားခဲ့သည်..။ ကျမရေနစ်မသွားနိုင်ပေဘူးလား..။ ကျမရေနစ်သွားခဲ့လျှင် ရှင်ဆယ်မည်မဆယ်မည် မသေချာသော်လည်း ရှင် မဆယ်နိုင်မီမှာပင် အအေးဒဏ်ကြောင့် ကျမသေသွားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
တံတားအောက်ခြေ အုတ်တိုင်ကြီးကို အားပြုဖက်တွယ်လျက် ရေခဲလွှာပေါ်သို့ချထားသော ခြေတစ်ဘက်ကို ဖိနင်းလိုက်သည်။ ခြေတစ်ဘက်၏ ခပ်ဖိဖိအလေးချိန်ကို ရေခဲလွှာက ကောင်းကောင်းခံနိုင်သားပဲ..။ သို့သောခြေနှစ်ဖက်လုံး စုံရပ်ကြည့်ဖို့ဖြင့် ကျမမ၀ံ့ရဲပါ..။ တနည်းအားဖြင့် ရှင့်ရှေ့မှောက်မှာ ကျမအရှက်ကွဲမခံသင့်ပါ..။
ရှေ့ဆက်လည်းမနင်းရဲ။ လက်လျှော့ကာနောက်သို့လည်း ပြန်မဆုတ်ချင်။ အုတ်တိုင်ကြီးကိုဖက်လျက် ကြာမြင့်စွားတွေတွေကြီး မှီရပ်နေခဲ့သည့် ကျမပုံစံကို ကျမမြင်ယောင်ကြည့်မိသည်..။ ဒဏ်ပေးခံရသော ကလေးတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့ပါလိမ့်မည်..။ နောက်ဘက်ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာရှင်က လက်ပိုက်မတ်တတ်ရပ်လျက် ကျမက အုတ်တိုင်ကို မှီကပ်ပြီး မြစ်ကမ်းပေါ်မှာ ခြေတစ်ဖက်၊ ရေခဲပြင်ပေါ်မှာခြေတစ်ဖက်ထောက်ကာ မတ်တတ်ရပ်လျက်။ အဲဒီပုံစံသည် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရူးမူးချစ်နေခဲ့ကြသည့် ချစ်သူနှစ်ဦးပုံစံတော့ဖြင့်မဟုတ်နိုင်ပါ..။
အဲသည်အတိုင်း ဘယ်လောက်ကြာအောင် ဆက်လက်ပေကပ်နေနိုင်ကြပါ့မလဲဟု ကျမစိတ်ပူမိခဲ့သည်..။ ရှင့်ဆီက ကျမကိုလှည့်ပြန်ရလျှင်ကောင်းမလား၊ ကျမဆီသို့ရှင်တိုးကပ်လာကာ လက်တွဲလေမလား။ တစ်ယောက်ယောက်တော့ စတင်လှုပ်ရှားဖို့လိုလိမ့်မည်..။ ကျမကပဲ အရှုံးပေးလိုက်ပါတော့မည် ...ဟူသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ခြေလှမ်းပြန်ဆုတ်ဖို့ အားယူဆဲမှာ ရှင့်အသံကိုကျမကြားရသည်..။
စိတ်မရှည်နိုင်တော့သော လူကြီးတစ်ယောက်၏အသံမျိုးဖြင့် ရှင့်ပြောခဲ့တာ သည်စကားတစ်ခွန်းပါပဲ..။
ကျမကပျာကယာ ပြန်လှည့်လာရသော်လည်း မျက်နှာကိုတော့ မြေပြင်ရှိရာသို့ ငုံ့နေစေခဲ့သည်..။ ရှင်က ကျမကိုလက်မကမ်းပေးခဲ့ပါ..။ ထို့ကြောင့် ကျမရှင့်ကိုမမှီတွယ်ခဲ့ရပါ..။
အကယ်၍သာ...“မင်းဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ရူးရတာလဲ”ဟု တစ်ခွန်းလောက် ရှင်ဘက်က အပြစ်ဆိုခဲ့လျှင်ကျမတို့သည့်ထက်ပို၍ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားသွားခဲ့မည်ထင်သည်..။
“ကျမ အခုလို ရေခဲနေတဲ့ မြစ်တစ်ခုပေါ်မှာ တစ်ခါမှ ခြေမချကြည့်ဖူးလို့ပါ” ဟုကျမဘက်က် ဖြေရှင်းနှစ်သိမ့်ခွင့် ရသွားခဲ့နိုင်ပါသည်..။ ထိုစကားကြောင့် ရှင်ရယ်မောကောင်း ရယ်မောလိမ့်မည်..။ နှာခေါင်းရှုံ့ကောင်းရှုံ့ ခဲ့လိမ့်မည်..။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ကျမတို့နှစ်ယောက်စကားမပြောဘဲ အကြာကြီးတိတ်ဆိတ်စွာ လမ်းလျှောက်သွားနေခဲ့ရသည့် အဖြစ်လည်း ဖြစ်လာခဲ့မှာမဟုတ်ပါ..။
ယခုတော့ ရှင်က အေးအေးဆေးဆေးရှေ့မှလမ်းလျှောက်သွားနေခဲ့သည်..။ ကျမက ဘေးမကျတကျ နောက်မကျတကျ နေရာမှ ခပ်ခွာခွာလိုက်၍လမ်းလျှောက်သွားနေခဲ့သည်..။
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလည်း ကျမတို့အခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာပင် အေးစက်ထိုင်းမှိုင်းနေခဲ့သည်။
ကျမတို့အနီးမှာ မြင်နေရသည်က အနက်ရောင်ကဲနေသည့် (သစ်ရွက်သစ်ခက်ရှားပါးသော) သစ်ကိုင်းသက်သက်သစ်ပင်များ၊ ထိုအနက်ရောင်ပေါ်မှာတစ်ပိုင်းတစ်စ ဖုံးအုပ်လျက်၊ တစ်ဝက်တစ်ပျက် တွဲလဲကျနေသော နှင်းပွင့်နှင်းဆုပ်ဖြူလွလွများ၊ အပင်နှင့် အဆောက်အအုံတို့၏ အောက်ခြေမှာ ပုံကျနေသည့် ထူထပ်သော နှင်းထုလွင်ပြင်များ၊ ကျမတို့လိုပင် စိုက်စိုက် စိုက်စိုက်နှင့် လမ်းလျှောက်နေသူတချို့၏ လေးလံထိုင်းမှိုင်းဟန်ရှိသော ခပ်မည်းမည်းအပေါ်ဝတ်အကျီင်္ ထူထူပွပွကြီးများ။ အားလုံးသည် အဖြူအမည်းနီးပါးအရောင်လျှော့ချထားသည့် ဗီဒီယိုပြကွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့် တူနေခဲ့သည်..။ ကြည့်လေရာမှာတော့ နူးညံ့ပွရောင်းသော ၀ါဂွမ်းစိုင်တွေလို ဖြူဖွေးနေသည့်နှင်းတွေ။ မိုးကောင်းကင်ပေါ်က တိမ်တွေ မြေပြင်ပေါ် အကုန်ဆင်းလာကြသလို ခမ်းနားလှပသော နှင်းတွေ...။
နှင်းမြူတွေဆိုင်းနေသည့် အပူပိုင်းဒေသက ဆောင်းနံနက်ခင်းတွေကိုလည်း ကျမချစ်သည်..။ ကောင်းကင်ဆီမှ တဖွဲဖွဲလွင့်ကျလာတတ်သောနှင်းပွင့် နှင်းဖတ်ကလေးများကိုလည်း ကျမချစ်သည်။ ယုတ်စွအဆုံး မြာသေးသေးလေးတွေလို မျက်နှာဆီသို့ စူးခနဲ လာ၍ထိမှန်သော အေးစက်တုန်ခိုက်စေသည့် မိုးနှင်းစိုစိုများကိုပင်လျှင် ကျမချစ်ပါသည်..။
နှင်းကိုကျမချစ်မှန်း ရှင်ကောင်းကောင်းသိခဲ့သည်..။ အဲဒါကြောင့်အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ တက္ကသိုလ်မြို့ကလေးသို့ ကျမရောက်ဖူးအောင် ရှင်လိုက်ပို့ခဲ့သည်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား...။
ပထမဦးဆုံး အကြိမ် နှင်းတွေကို လက်ခုပ်ဖြင့် ဆုပ်ယူ၍ နှင်းဘောလုံးလုပ်ကြည့်ရစဉ်က ဆိုလျှင် ဟောဒီကမ္ဘာကြီးမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ရတာ အင်မတန်ထိုက်တန်တာပဲဟု ကျမကြည်နူးစွာပင် ကျေနပ်သွားခဲ့ရပါသည်..။
ငယ်စဉ်က ကလေးဘ၀တုန်းက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ သို့မဟုတ် ရောင်စုံ ဓါတ်ပုံစာအုပ်ကြီးထဲမှာ နှင်းတွေဖြူဖွေးကာ အဆုပ်လိုက် အပုံလိုက်ဖြစ်နေသည်ကို ကြည့်ရတိုင်း အသည်းတယားယားနှင့်ပျော်မိသည်..။ ကြည့်စမ်း...။ ဘယ်လောက်အဖိုးတန်လိုက်မယ့် နှင်းတွေလဲ..။ တုတ်ချောင်းကလေးရဲ့ ထိပ်ဖျားမှာနှင်းတွေကိုလက်ခုပ်ဖြင့် ဆုပ်ညှစ်ပြီး ရေခဲပေါက်စီများလုပ်လိုက်ရလျှင် ဘယ်လောက်ကောင်း လိုက်လေမလဲ။ ကျမတို့မြို့ကလေးမှာ ရေခဲပလုတ်တုတ်ကို ရေခဲပေါက်စီဟု ခေါ်ပါသည်..။ တုတ်ချောင်းကလေးများထိပ်ဖျားတွင် ရေခဲခြစ်မွမွကလေးများကိုအလုံးလိုက်စုယူဆုပ်ညှစ်၊ ထိုရေခဲပေါ်သို့ အစိမ်းရောင်၊ အနီးရောင်၊ လိမ္မော်ရောက် အရောင်းဆိုးထားသည့် သကြားချိုရည်များကို စိုရွှဲနေအောင် ဆမ်းပေးလိုက်သောအခါ ကလေးတွေ အလွန်ကြိုက်သည့် ရေခဲပေါက်စီဖြစ်သွားပါသည်..။ ရေခဲပေါက်စီသည်ကြီးသည် အဲသည်နှင်းတွေကိုများ တွေ့လိုက်ရလျှင်..ဘယ်လောက်ပျော်သွားလိုက်လေမလဲ..။
တကယ်တမ်း နှင်းတွေကို လက်ဖြင့်စုယူဆုပ်ကိုင်ကြည့်နိုင်သည့်အချိန်မှာတော့ ကျမသည် ရေခဲပေါက်စီကို မက်မောသော ကလေးအရွယ်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ လွန်ခဲ့ပြီးပြီမို့ နှင်းဆုပ်ကလေးကို ကျမ၏ပါးပြင်နှင့်သာ ခပ်ဖွဖွထိထားလိုက်မိသည်..။ အေးခဲထံကျင်ခဲ့ပြီးသောပါးပြင်သည် နှင်းဆုပ်ကလေး၏ အတွေ့ကြောင့် ပို၍အေးစက်စူးရှသွားခဲ့သေးလား၊ ကျမမမှတ်မိတော့ပါ..။ ကျမမှတ်မိသည်က ရှင့်အပြုံးသာဖြစ်သည်..။ အဲသည်အချိန်မှာ ကျမကို ကြည့်၍သဘောကျစွာပြုံးလိုက်သော ရှင့်အပြုံးကို ကျမချစ်ပါသည်..။ အဲသည်အပြုံးကို ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံး ကျမရခဲ့လျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ..နော်..။
တကယ်တော့ ရှင်သည် နှင်းကိုမနှစ်မြို့သူဖြစ်သည်..။ အင်းလေ မနှစ်မြို့ဘူးဟု မပြောသာလျှင်တောင်မှ နှင်းကို မချစ်တာတော့အမှန်ပါပဲ..။နှင်းကို စိတ်မရှည်နိုင်တာလား၊ နှင်းကိုချစ်သည့် ကျမအပေါ်စိတ်မရှည်နိုင်တာလား..။
နှင်းပွင့်နှင်းဖတ်ကလေးတွေကို ကြည့်နေသူချင်းအတူတူ ကျမ၏ အတွေးနှင့်ရှင့်အတွေးတို့က ဘယ်တုန်းကမှတူညီခဲ့သည်မဟုတ်..။ ရောက်ရောက်ချင်း ညနေခင်းတုန်းက တစ်ထပ်ချင်းတစ်လွှာချင်း လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းလာနေသော ပထမဆုံးနှင်းဖတ်ကလေးများကို မှန်ပြူတင်းပေါက်မှ လှမ်းကြည့်ကာ ကျမမှာတော့ အဲသည်နှင်းကလေးတွေကိုမျက်နှာမော့လျက် ခံယူချင်စိတ်ဖြင့် ရင်ခုန်နေခဲ့သည်၊။ ရှင်ကတော့ ညစာကို အိမ်တိုင်ရာရောက်လာပို့ပေးဖို့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့ တယ်လီဖုန်းလှမ်းဆက်နေခဲ့သည်..။ သဘောက ညစာ စားဖို့ထွက်ရင်းနှင်းတွေကို ကျမ မထိမကိုင်ရတော့ဘူးပေါ့..။
အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ၊ ညစာ စားအပြီးမှာ အပြင်သို့ ခဏထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်သားပဲ..။
အဲသည်ညက ဆောင်းရာသီ၏ ပထမဆုံးနှင်းပွင့်များအောက်သို့ အပြေးထွက်သွားကြိုဆိုသူမှာ ကျမတစ်ယောက်တည်း ရှိခဲ့ဟန်တူပါသည်..။
တဖွဲဖွဲကျလာနေသော ဖြူလွလွ နှင်းပွင့်နှင်းဖတ်ကလေးများကို မျက်နှာမော့လျက်၊ လက်နှစ်ဖက်ဘေးသို့ ဆန့်တန်းလျက် ကျမကြိုဆိုခဲ့တော့သည်..။ မျက်နှာကို ဒေါင်လိုက်မျဉ်း အနေအထားမှ ဘေးတိုက်ရေပြင်ညီမျဉ်နှင့် တတန်းတည်းဖြစ်သွားအောင် မော့ပစ်လိုက်သောအခါ မြင်ရသော ကောင်းကင်နက်ပြာရောင်သည် နှင်းပွင့်နှင်းဖတ်များ ဖောက်ရက်ထားသော ဇာပ၀ါတစ်ခုဖြင့် ၀ိုးတ၀ါး ကာဆီးလျက်ရှိသည်..။ လှပသော ဆောင်းညပန်းချီကား တစ်ချပ်မှာ ကြယ်ပွင့်လေးတွေတောင်ပါနေ သေးတော့သည်..။
မျက်နှာပေါ်မှာ လက်ဖ၀ါးအစုံပေါ်မှာ နှင်းဖတ်လေးတွေ တင်လာသည်ကို အေးစက်စွာခံစားရင်း ပါးပြင်ဆီမှာ စူးရှထုံကျင်မှုကိုခံစားရင် ကျမရင်ထဲမှာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာဖြင့် နွေးထွေးလျက်ရှိခဲ့သည်..။
“ဒီလောက်အေးခဲလှတဲ့ အပြင်ဘက်မှာ မင်းဘာလုပ်နေတယ်လို့ မင်းထင်လဲ”
ရှင့်စကားသံက ကျမနောက်မှာပေါ်လာသောအခါ ကျမလှည့်မကြည့်ဘဲ ရှင်ပြုံးနေသည်ကို ခံစားလိုက်ရသည်..။
နောက်တာ့ ကျမမျက်နှာနှင့် ကောင်းကင်ကြားမှာ ရှင့်မျက်နှာက ပိတ်ဆီးကာလိုက်ပါသည်..။ နက်ပြာရောက်ကောင်းကင်ကိုမမြင်ရ၊ နှင်းဇာပ၀ါကို မမြင်ရ၊ ကြယ်တွေကိုမမြင်ရ။ ခဏကလေး။ ကျမကြယ်နှစ်ပွင့်ကိုတော့မြင်နေခဲ့ရ၏..။ စူးရှစွာ လင်းလက်သည့် ကြယ်ကလေးနှစ်ပွင့်ပေါ့..။ တကယ်ပဲ ထိုကြယ်ပွင့်ကလေးတွေ ပြုံးနေခဲ့ပါသည်..။
နွေးထွေးသော ရှင့်လက်များ၏ နူးညံ့စွာထွေးဆုပ်မှုကို လိုက်လျောရင်း ထိုကြယ်ပွင့်ကလေးတစ်စုံ၏နောက်သို့ လိုက်သွားခဲ့သော ကျမ၏ခြေလှမ်းများမြေနှင့် မထိခဲ့ပါ...။ နွေးထွေးသောအပေါ်ဝတ်အကျီင်္ပွပွကြီးထဲ့သို့ ကျမကိုယ်ခန္ဓာလေးလှစ်ခနဲ ၀င်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ..ကျမ၏ အာရုံထဲသို့ အဝေးဆီမှ
တကယ်မကြားနိုင်သော ဂီတတစ်ခု တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လွှမ်းခြုံလိုက်တော့သည်..။
ခြေလှမ်းလှမ်းဖို့လည်းမေ့၊ စကားပြောဖို့လည်းမေ့၊ အသက်ရှုဖို့ပင်မေ့အောင် ကျမကိုစိုးမိုးလိုက်သည်က အာရုံထဲက သီချင်းသံစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်..။
ကျမသီချင်းနှင့် ဂီတကိုနှစ်သက်မှန်းလည်း ရှင်သိခဲ့ပါသည်..။
အဲသည်လို ရှင်မေးလိုက်တော့မှပဲ ကျမ မဖြေတတ်သည့် အဖြေတစ်ခုကို စခဲ့မိပြီဟု နောက်ကျစွာ သိလိုက်ရတော့သည်..။
ဘာသီချင်း...ဟုဖြေတော့ရော ရှင်သိမှာတဲ့လား...။ ကိုစောညိန်းကို ရှင်မှမသိနိုင်ဘဲ..။ “ချစ်နှင်းမှုန်”ဆိုတာကို ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနိုင်မှာလဲ..။ ရှင်များ နားလည်ခံစားနိုင်မည်ဆိုလျှင် အဲသည်သီချင်းကို ကျမဆိုညည်းပြလိုက်ချင်ပါသည်..။
ရွှေရင်အုံ......လှိုင်းခုန်ကြွလို့ရယ်...နှင်းမှုန်ကြွေလေတိုင်းဝယ်...သွယ်...မျက်ရည်ဝိုင်းခဲ့ညတိုင်းမယ်... မောင့်မှာသာကွယ်၊ တစ်ရံရောအခါက....မောင်နဲ့မယ် ချစ်ကြိုးနှောင်ကာသွယ်.... ငွေဇာရုံ...ခြုံလွှာပုံသို့နှယ်... ချစ်နှင်းမှုန် တဖွဲဖွဲကြဲကာ မစဲတော့တယ်.....
“နှင်းတွေကျတဲ့ ညတိုင်း မျက်ရည်လည်ရတဲ့ လွမ်းတတ်တဲ့ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ သီချင်းပေါ့”
ဘာသာစကားမကျွမ်းကျင်သောကြောင့် ကျမ၏ အဖြေသည် သီချင်း၏ နက်နဲမှုနှင့် ဘာမှမယှဉ်သာအောင်
ပေါ့ပျက်ခဲ့မည် ဆိုလျှင် ကိုစောညိန်းရောက်ရာဘ၀မှ ခွင့်လွတ်နိုင်ပါစေဟုသာ ဆုတောင်းရပါတော့မည်..။
“သြော်ကွယ်....သိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူနှစ်ဦး အပြီးအပိုင်ဝေးကွာသွားခဲ့ရတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ခါ ကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာရင် ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့လူက လွမ်းရတတ်တာပဲ မဟုတ်လား”
ကျမအဖြေကြောင့် ရှင်ပုခုံးတွန့်သွားခဲ့သည်ဆိုတော့ သူ့ခံစားမှုကို ရှင်အသိအမှတ်မပြုချင်သည့် သဘောပေါ့ နော်..။ အဲသည်အတွေးကြောင့် ကျမ၀မ်းနည်းသွားခဲ့မိပါသည်...။
ရှင်စိတ်မရှည်စွာရေရွတ်သတိပေးလိုက်သော တစ်...နှစ်...သုံး ...ဂဏန်းစဉ်တွေကို ကျမချစ်သည်..။
ရှင်ဖျော်ပြီးသားကောဖီကိုသောက်ဖို့ ကျမအပြင်သို့ မထွက်လာသေးဘူးဆိုလျှင် ရှင့်နှုတ်ဖျားမှ တစ်နှစ်သုံးရေရွတ်သံကို ကျမကြားရတတ်သည်။
“ကိုယ် တစ် နှစ် သုံး တစ်ဆယ်ထိရေပြီးလို့မှ မင်းကော်ဖီမသောက်သေးဘူးဆိုရင် အဲဒီကော်ဖီခွက်ကို ကိုယ်သွန်ပစ်လိုက်တော့မှာနော်၊ တစ် နှစ် သုံး....လေး ”
ကျမသည် စိတ်ကောက်တတ်သည့် ကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ သို့သော် စိတ်ကောက်တတ်သည့် ကလေးတစ်ယောက်ကို ဆက်ဆံသလို ဆက်ဆံခံရသောအခါ ပထမပိုင်းမှာတော့ တော်တော် အောင့်သက်သက်ခံစားခဲ့ရ၏။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲဒီလို ဆက်ဆံခံရတာကို ကျေနပ်သလိုရှိလာသည်။ ထိုအခါ မကြာခဏပင် စိတ်ကောက်ချင်ယောင်ဆောင်မိခဲ့တော့သည်။ ရှင် တစ် နှစ် သုံး ရေရွတ်ပြီး ကျမကို သတိပေးခြိမ်းခြောက်ရသောအကြိမ်တိုင်းသည် ကျမတကယ် စိတ်ကောက်နေခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရှင့်နှုတ်ဖျားမှ တစ် နှစ် သုံး ရေရွတ်သံကို ကြားချင်စိတ်တို့ဖြင့်လည်း ကျမစိတ်ကောက်ချင်ယောင်၊ သို့မဟုတ် တစ်ခုခုပြုလုပ်ဖို့မေ့လျော့ချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့မိတတ်ပါသည်။
“စာကြည့်စားပွဲပေါ်က စာအုပ်ပုံကြီးကို ရှင်းပစ်ပါလို့ ကိုယ်ပြောနေတာ ဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလဲ၊ အခုသွားရှင်းချည်တော့”
ရှင့်စကားသံကို မကြားသလိုရေဒီယိုကို သဲကြီးမဲကြီး နားထောင်ရင်း တကယ်ပျင်းရိနေခဲ့တာလည်းရှိဖူးပါသည်..။ ထိုစဉ်က ရှင်သည် ကျမနားထောင်နေသော ရေဒီယိုလိုင်းအစား တခြားလိုင်းတစ်ခုခုကို ပြောင်းပစ်ခဲ့သည်။ အသံကိုလည်း တိုးသွားအောင် လျှော့ချပစ်ခဲ့သည်။
“ကိုယ် တစ် နှစ် သုံး တစ်ဆယ်ထိ ရေပြီးလို့မှာ မင်း အလုပ်မစသေးဘူးဆိုရင် မင်းကို အကျီင်္ကော်လာကနေ ဆွဲယူပြီး အဲဒီစားပွဲပေါ် ပစ်တင်လိုက်မယ်နော်...တစ် ..နှစ်....သုံး ”
ကျမသည် ရှင် နှုတ်ဖျားမှ ရေရွတ်သော ဂဏန်းစဉ်တို့ကို ချစ်သောကြောင့် အမြဲပင်ပေကတ်ကာ နားထောင်နေခဲ့မိသည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်သည် တစ် နှစ် သုံး ကို ကိုးအထိ အမြဲရေရွတ်ရလေ့ရှိသည်။ “ကိုး”ကို ရေရွတ်ပြီးသောအခါမျာတော့ ကျမကမန်းကတန်းထပြီး အလုပ်စရတော့သည်..။ အဲဒီဂဏန်းရေရွတ်သံတို့ကို ကျမချစ်သည်ဆိုတာ ရှင့်ကို တစ်ခါမှ ဖွင့်မပြောခဲ့ဖူးပါ..။ ထို့ကြောင့် အဲသည် တစ် နှစ် သုံး ရေရွတ်သံတို့သည် စိတ်မရှည်သော ဒေါသအရိပ်အငွေ့တို့ဖုံးလွှမ်းလျက် အမြဲမာမာထန်ထန်ရှိနေခဲ့သည်။ သို့ပါလျက် အဲသည် မာရေကျောရေ(စိတ်ရှည်အောင် မနည်းအားတင်းထားရမှန်းသိသာသော) တစ် နှစ် သုံး တွေကို ကျမချစ်ခဲ့ပါသည်။
ရှင့်ကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်မသလဲဆိုလျှင် ကိုယ့်အာရုံနှင့်ကိုယ် တစ်နေရာမှာ အလုပ်ရှုပ်နေသော ရှင့်ကို တိတ်တဆိတ်ငေးမောကြည့်ရင်းမျက်ရည်ကျမိသည်အထိပင် ဖြစ်သည်..။
ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကို ချစ်စိတ်သက်သက်ဖြင့် မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ မျက်ရည်ကျတတ်ပါသလား။ ချစ်သူချင်း သို့မဟုတ် ဇနီးမောင်နှံချင်း ရန်ဖြစ်လို့၊ စိတ်ကောက်လို့၊ စေတနာကိုစော်ကားခံရလို့၊ အထင်လွဲခံရလို့ စသည်ဖြင့် မိန်းမတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မျက်ရည်ကျတတ်ကြသည်ဟု ကျမသိပါသည်။ ထိုမျက်ရည်များ ပူလောင်နေပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကို ချစ်မြတ်နိုးစိတ်သက်သက်ဖြင့် နှလုံးသားတွေ နာကျင်ထိုခိုက်ကာ မျက်ရည်ကျရသည့်အဖြစ်တော့ ကျမတစ်ခါမျှ မကြားဖူးခဲ့ပါ..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်မြတ်နိုးစိတ်ဖြင့် ကျရသည့် မျက်ရည်သည်လည်း ပူနွေးလှပါသည်။ ကျမမျက်လုံးအစုံမှာ တိတ်ဆိတ်စွာ လိမ့ဆင်းလာခဲ့ဖူးသော ထိုမျက်ရည်တို့၏ပူနွေးမှုကို မကြာခဏပြန်လည်သတိရစွာဖြင့် ကျမပါးပြင်မှာ မကြာခဏနွေးထွေးလာခဲ့တတ်ပါသည်။
ကျမ၏ မှတ်ဥာဏ်သည် ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ မှတ်ဥာဏ်နှင့်တော့ တူချင်မှတူမှာပါ။
ကျမက ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးသော အတိတ်ကာလမှ ကြီးမားသောအဖြစ်ပျက် အကြောင်းအရာများကို မေ့လျော့ပစ်တတ်ပြီး သေးဖွဲသောဘာမဟုတ်သည့် အဖြစ်အပျက်ကလေးများကိုသတိရမှတ်မိနေတတ်ပါသည်။
ကျမတို့နှစ်ဦး တစ်ပတ်ကြာမျှ သွားရောက်လည်ပတ်ဖူးသော ထိုတက္ကသိုလ်မြို့ကလေးကို ကျမ မကြာခဏမြင်ယောင်ပုံဖော်ကြည့်မိသောအခါ ရှင် သတိရစေချင်သော ခမ်းနားကြီးကျယ်သည့် တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကြီးကို သဲကွဲစွာ မမြင်ယောင်မိပါ။ ရှင်ပြောပြခဲ့သော ထိုစာကြည့်တိုက်၏ နောက်ခံသမိုင်းမဖြစ်အပျက်ကို စဉ်းစားပုံဖော်ကြည့်တော့လည်း ရေးရေးသာ မှတ်မိခဲ့ပါသည်။ ကျမမှတ်မိသည်က စာကြည့်တိုက်ရှေ့က လူသွားစင်္ကြံ အကျယ်ကြီးဘေးမှာ ကျမ မြင်ခဲ့ရသော ဖြူဖွေးသည့် နှင်းအပုံလိုက်ကြီးသာဖြစ်သည်။ ထိုနှင်းအပုံလိုက်သည် ကျမ၏ ဒူးအမြင့်လောက်ရှိပါသည်။ နှင်းတို့သည် အပေါ်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းတွင် ၀ါဂွမ်းစိုင် အပုံကြီးကဲ့သို့ နူးညံ့ပွရောင်းကာ ဖြူဖွေးလျက် ရှိသော်လည်း ဘေးနားတစ်ဝိုက်မှာတော့ တက္ကသိုလ်မြေ၏ ဖုန်မှုန့်မြေမှုန့်များရောထွေးကပ်ငြိလျက် ညိုညစ်ညစ်အရောင်ရှိနေသည်။ နှင်းတွေကို ညိုညစ်ညစ် အရောင်အဖြစ် တစ်ခါမှ မစဉ်းစာခဲ့ဖူးသော ကျမအတွက် ဤမြင်ကွင်းသည် တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ထက် ပို၍ထူးဆန်းနေခဲ့ပါသည်။ ဒါထက်ထူးဆန်းနေသည်က အဲသည် နှင်းအပုံကြီး၏ ပတ်လည်မှာ စိုက်ထားသော ခြံစည်းရိုးတိုင်သဖွယ် ကျဲပါးသော တိုင်မည်းမည်းများအနက် တိုင်တစ်ခု၏ထိပ်ဖျားတွင် ငှက်ကလေးတစ်ကောင် နားနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုငှက်ကလေးသည် အညိုရောင်လည်ရစ်နှင့် အမည်းရောင် အတောင်ပံများရှိပါသည်။ သူ့အတောင်ပံများသည် နှင်းတို့ဖြင့် စိုစွတ်လျက်ရှိသောကြောင့် တိုင်ထိပ်ဖျားကို ခြေကုပ်ယူလျက်အတောင်ပံကိုမကြာခဏဖြန့်ခါလျက်ရှိပါသည်..။ အဲသည်မြို့မှာ ကျမနေခဲသမျှရက်တွေအတွင်း အဲသည်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုသာ ကျမတွေ့ခဲ့ရသည်ဟုမှတ်မိသည်။ တခြားငှက်တွေ ဘယ်မှသွား၍ ဆောင်းခိုနေကြပါလိမ့်။ သည်ငှက်ကရော ဘာလို့တခြားငှက်တွေနှင့် အတူရောမနေဘဲ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ရှေ့သို့ လာ၍ နားနေခဲ့ပါလိမ့်။
ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းက သွားရင်းလာရင်းလမ်းမှာ ငှက်ကလေးတွေကို တွေ့လျှင် တစ်ကောင်တည်းတွေ့တာလား၊ နှစ်ကောင်လား အပြေးအလွှားသတိထား၍ ရေတွက်လေ့ရှိကြပါသည်။ နှစ်ကောင်တွေ့လျှင် လာဘ်ကောင်းသည်၊ သုံးကောင်တွေ့လျှင်ပျော်ရွှင်စရာကြုံလိမ့်မည်...စသဖြင့် သူ့အဓိပ္ပာယ်နှင့်သူ ဖော်ပြီး နိမိတ်ကောက်ယူလေ့ရှိကြသည်။ အကောင်အရေအတွက်နှင့် နိမိတ်အကြောင်းကို ကျမကောင်းကောင်းမမှတ်မိပါ..။ သေချာသည်ကတော့ တစ်ကောင်တည်းတွေ့ရခြင်းသည် မကောင်းသော နိမိတ်ဖြစ်သည်။ တစ်ကောင်တည်း တွေ့ရခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အထီးကျန်ဖြစ်ရတတ်ခြင်း၊ ကံဆိုးရတတ်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းရတတ်ခြင်း...တဲ့..။
အဲသည် အယူအဆ၊ အဓိပ္ပာယ်တွေကို ကောက်ယူပုံဖော်တမ်း ကစားသည့်အရွယ်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလျက် ထိုတစ်ကောင်တည်းသော ငှက်ကလေး၏ မြင်ကွင်းကို ကျမမကြာခဏ မြင်ယောင်လာလေ့ ရှိပါသည်..။ ဒါက ကျမ၏ အားနည်းချက်တစ်ခုပဲလားမသိပါ။
ထိုတက္ကသိုလ်မြို့ကလေးတွင် ရှင်သတိရမှတ်မိနေမည့် အဆောက်အအုံ အကြောင်းအရာများကတော့ ကျမမှတ်မိသော အရာတို့နှင့် တော်တော်ကြီးကွားခြားလိမ့်မည်။ ကျမသိပါသည်။
ထိုကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်၏ သူများနှင့်မတူထူးခြားစွာဘ၀င်မြင့်သော စည်းကမ်းချက်ကြီးများကို ရှင်သတိရလိမ့်မည်..။ ကြီးမားခမ်းနားသော စက်မှုတက္ကသိုလ်ကြီးသ်ည ရှင်ငယ်စဉ်က တက်ရောက်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးသည့်အတိုင်း တစ်ပုံစံတည်းကြီးကျယ်နေခဲ့သလားဟု ရှင်တအံ့တသြဖြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်းကို သတိရနေလိမ့်မည်..။ ထိုစက်မှုတက္ကသိုလ် စာသင်ခန်းများ၏ စင်္ကြံတွင် ကျမတို့လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြသည်ကို ရှင်ခဏသတိရမည်ဖြစ်သော်လည်း ချက်ချင်းပင် ရှင်သည် နံရံကပ်ကြော်ငြာဘုတ်ပြားပေါ်မှ သချာင်္ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်၏ ဖြေရှင်းချက်စာရွက်ကို ကူးပြောင်းသတိရလိမ့်မည်။
ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ပြတိုက်ကြီးကို ပြန်လည်စဉ်းစားပုံဖော်ကြည့်လျှင်တော့ ရှင်သည် ပြတိုက်သို့အ၀င်မှာ တွေ့ရသောကမ္ဘာကျော်ပန်းပုဆရာကြီး၏ လူတစ်ရပ်မြင့်သည့် ပန်းပုလက်ရာကြီးကို စူးစူးစိုက်စိုက် ငေးမောကြည့်မိသည့်အဖြစ်ကို သတိရမိပါလိမ့်မည်။ ကျမ သတိရသော ပြတိုက်အ၀င် အဖြစ်အပျက်ကလေးကို ရှင် သတိရမှာမဟုတ်ပါ။ ကျမအတွက်တော့ အဲသည်ပြတိုက်အ၀င်မှာ အမှတ်တရ အဖြစ်အပျက်ကလေး နှစ်ခုထူးထူးခြားခြားရှိခဲ့၏။ တစ်ခုက ရှင်သည် ကျောင်းသားကဒ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်သဖြင့် ပြတိုက်ဝင်ကြေးကို တစ်ဝက်ခသာပေးရပြီး ကျမက ၀င်ကြေးအပြည့်ပေးရသည့်အဖြစ်၊ နောက်တစ်ခုက ၀င်ကြေးကောက်ခံသူ အမျိုးသမီးမေးလိုက်သော ကျမ၏နေရပ်လိပ်စာ၊ ပြည်နယ်ကုတ်နံပါတ်ဂဏန်းများကို ကျမကိုယ်စား(ကျမကထိုအမျိုးသမီး၏ စကားသံဝဲ၀ဲကို နားမလည်နိုင်ခဲ့သဖြင့်) ရှင်က ရွတ်ပြဖြေဆိုပေးခဲ့ရသည့်အဖြစ်။ ကဲ...အဲသည် ကျမ သတိရနေသည့် အကြောင်းအရာသည် ဘယ်လောက်သေးနုတ်ပါသလဲ။ ရှင်သတိရစွာ ပြန်လည်မှန်းဆမည့် ပန်းချီကားတွေ၊ ရုပ်တုတွေ ၊ ဆေးစိမ်မံမီရုပ်အလောင်းတွေနှင့် ကျမ သတိရနေသည့် ခပ်ကြောင်ကြောင် အဖြစ်အပျက် အကြောင်းအရာမှာ ဘယ်လောက်တောင်ကွာခြားလိုက်မလဲ...နော်။ ဒါကတော့ ပညာဆက်လက်သင်ယူနေဆဲ အမျိုးသားတစ်ယောက်နှင့် ခပ်တုံးတုံး ခပ်အအ မိန်းမ တစ်ယောက် အတူပေါင်းဖက်မိလျှင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် သမားရိုးကျကွာခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
နှင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် ရှင်က အနိဌာရုံတွေကိုသာ အများကြီးမြင်ယောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ရှင် ပြောပြသောနှင်းတောင်ပြိုကွဲခြင်း၊ နှင်းမုန်တိုင်းထဲမှာ ကားတွေလမ်းပျောက်ကာ တိုးတိုက်မိခြင်း၊ ရေခဲပြင်လမ်းပေါ်မှာ ကားဘီးတွေချော်ကာ ဟိုးတောင်စောင်းအောက်ခြေသို့ ကားမှောက်ကျခြင်း စသည့်တို့ကို ကျမထိတ်လန့်စွာပင်လက်ခံရပါသည်။
သို့သော် နှင်း၏ ချစ်စရာကောင်းသောသဏ္ဍာန်နှင့် နူးညံ့အေးစက်သော ထိတွေ့မှုကို ကျမရင်ခုန်မိဆဲဖြစ်သည့်အတွက်တော့ ရှင်ခွင့်ပြုစေချင်သည်။
၁၉၉၆ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀ရက်နေ့တုန်းက နှင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရသော ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဧ၀ရက်တောင်ထိပ်မှာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှင်လောလောလတ်လတ်ဖတ်ပြီးသွားသော ဂျွန်ခရာကိုဝါး Jon Krakauer ၏ Into Thin Air အတ္ထုပ္ပတ္တိမှန်စာအုပ်ကို ကျမကိုပေးဖတ်လျက် ဧ၀ရက်တောင်ထိပ်မှာ နှင်းမုန်တိုင်းထဲ၌ အသက်ပျောက်သွားကြသော တောင်တက်သမားများအကြောင်း ကျမကိုရှင်အသေးစိတ်ပြောပြခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်ရပါသည်။ ဒါပေမယ့် နှင်းကြောင့်သူတို့အားလုံးသေရသည်ဟုတော့ ကျမလက်မခံခဲ့ပါ။ မေလ ၁၀ရက်ညနေပိုင်းမှာ ပြိုဆင်းကျလာသောနှင်းမုန်တိုင်းသည် တောင်တက်သမားများကို အသက်သေသည်အထိ ဒုက္ခပေးခဲ့တာ ကျမလက်ခံပါသည်။ သို့သော တချို့လူတွေက အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်မှုကြောင့် အဓိက ဖြစ်ရသည်ဟု ရှင့်ကို ကျမဆင်ခြေတက်မိသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် ပေပေါင်း ၂၉၀၂၈ပေမှာရှိသော လေထုသည် ဘယ်လောက်များအောက်ဆီဂျင်နည်းနေပြီလဲ၊ မတွေးရဲစရာပဲဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ သေမင်းတမန်ဧ၀ရက်တောင်ကိုမှ ခြေချချင်သော တောင်တက်သမားများသည် နှင်းမုန်တိုင်းနှင့်တွေ့သည့်အခါ ဘာဖြစ်လို့ အောက်ဘက်သို့ ပြန်မဆင်းသလဲ၊ တောင်တက်ခေါင်းဆောင်က ကန့်သတ်ထားသော နာရီးအပိုင်းအခြားတွင် ရောက်ရာနေရာမှ လှည့်ပြန်ခဲ့ပါတော့လား။ ဘာဖြစ်လို့ ဧ၀ရက်တောင်ထိပ်ကို ဆက်လက်တက်နေသလဲ။ ကမ္ဘာကြီး၏ အမြင့်ဆုံးအပိုင်း(သို့မဟုတ်) ခေါင်မိုးထိပ်စွန်း၊ အဲဒါကရောလာများထူးခြားနိုင်မှာမို့လဲ..။ တကယ်တော့ သူတို့ကိုသတ်ခဲ့တာနှင်းမုန်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ အတ္တနဲ့လောဘက သတ်ခဲ့တာ..။
အဲသည်လို ကျမ ရှင့်ကို နိုင်အောင်ပြောရင်း စိတ်ထဲကတော့ မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ စွန့်စားရင်း အသက်ပေးသွားကြသော Rob Hall, Scott Fischer နှင့်တကွ တောင်တက်သမားများအား အံ့သြဂုဏ်ယူစိတ်ဖြင့် အထပ်ထပ်အခါခါ ဦးညွှတ်လျက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ှရှင်ကတော့ ကျမစိတ်ကို ထွင်းဖောက်မမြင်နိုင်သူမို့ ကျမစကားကိုပဲ တအံ့တသြတုန်လှုပ်စွာ နားထောင်နေခဲ့သည်။ တော်တော်ကြီးကြာမှ“မင်းဟာ တော်တော်အဆိုးမြင်တတ်တဲ့ မိန်းမပါလား” ဟု တိုးတိတ်စွာ ရေရွတ်ခဲ့သည်။
“ဟင့်အင်း ... ကျမက အကောင်းမြင်တာပါ၊ နှင်းဆိုတာက သူ့ကိုသွားမပတ်သက်ရင် အလွန်ချစ်စရာကောင်းတာ”
“မဟုတ်ဘူး၊ မင်းစကားကို ကတ်မပြောနဲ့လေ၊ နှင်းဆိုတာ အမြင်အားဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်စရာလှပသလိုရှိပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လူသတ်နေတဲ့ လူသတ်သမားပဲ”
ိထို့နောက် ကျမတို့နှစ်ယောက်လုံး ကိုယ့်ဒေါသအတွက် ကိုယ်ရှက်ကာ ပြုံးရယ်မိခဲ့ကြသည်။
တကယ်တော့ နှင်းကြောင့် ကျမတို့လည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့။ ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့။ နှင်းသည် ကျမတို့အတွက် အမြဲတမ်း စိတ်ကူးယဉ်စရာ အသွင်သဏ္ဍာန်ချည်းပဲ တည်ရှိခဲ့သည်။ နှင်းကြောင့် ကျမတို့စကားများ ခဲ့ကြသည်ဆိုလျှင် အဲဒါက မိနစ်ပိုင်းလောက်သာဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကျမတို့သည် နှင်းမပါဝင်သော အခြားအကြောင်းအရာများထဲတွင် စိတ်အာရုံ နစ်ဝင်သွားတတ်မြဲဖြစ်သည်။
တစ်ခုပဲ ကျမနောင်တ ရမိပါသည်။
အဲသည် နှင်းတွေနှင့်အတူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေခဲနေသောမြစ်ပြင်၏ ရေခဲလွှာနှင့်အတူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှေးဆန်ဆန် ခံ့ညားစွာက္ကနြေ္ဒရသော အဆောက်အအုံတွေနှင့် အတူပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့နှစ်ယောက် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံတစ်ခုခုရိုက်ခဲ့ဖို့ကောင်းသည်။ သည်သို့သာဆိုလျှင် ရှင်အံ့သြချီးကျူးခဲ့ဖူးသည့် မြင်ကွင်းများကို ကျမအာရုံမှာ အတိအကျ ပြန်လည်ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မည်။
ယခုတော့ ကျမသည် ရှင်နှင့်အတူတူသွားခဲ့သော ထိုတက္ကသိုလ်မြို့လေးအကြောင်း စဉ်းစားလိုက်လျှင် ကျမအာရုံထဲမှာ ရှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ရှင့်စကားသံများ၊ ရှင့်ဒေါသငွေ့ငွေ့ဖြင့်အပြုံးများစသည်တို့နှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်က ဖြူဖွေးသော နှင်းများကိုသာ မြင်ယောင်တမ်းတမိတော့သည်။
နှစ်အချို့ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးသည့်နောက် အဲသည်မြို့သို့ နောက်တစ်ကြိမ် ရှင်ပြန်သွားခဲ့သေးသလား။ သွားခဲ့သေးသည်ဆိုလျှင် ကျမနှင့်အတူ သွားတုန်းကလို ဆောင်းရာသီမှာသွားခဲ့တာလား။ ဆောင်းရာသီမှာ သွားခဲ့သည်ဆိုလျှင် ရေခဲနေသောမြစ်၏ မြစ်ကူးတံတားပေါ် ရှင်ခြေချမိခဲ့သေးသလား။ အဲသည်ပေါ်မှာ ရှင်လမ်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုလျှင် ရေခဲမြစ်ပြင်အပေါ်လွှာပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ကြည့်ချင်သည်ဆိုသော ခပ်ကြောင်ကြောင် ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ရှင် သတိရသွားခဲ့သေးလား။
အဲသည်မြို့ကို ထပ်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ အခြား အလားတူ မြောက်ပိုင်းမြို့များသို့ သွားဖြစ်သည် ဖြစ်စေ ဆောင်းရာသီ မှာတော့ နှင်းတွေ....နှင်းတွေ...ကြည့်လေရာမှာ နှင်းတွေကို ရှင် မကြာခဏသတိထား မိမှာပေါ့နော်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ နှင်းတွေကိုကြည့်ရင်း ရှင် မျက်ရည်ဝဲဖူးခဲ့ပြီလား။ ကျမသိချင်လှပါသည်။
ဆရာမဂျူးအား လေးစားဂါရ၀ပြုသောအားဖြင့် ဒီဇင်ဘာအမှတ်တရအတွက်
အရောင်များနှင့်ကစားခြင်း နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများမှ “နှင်း” ကိုထုတ်နုတ်ပြသပါသည်။
Posted by Cameron at 02:572comments:
သံစဉ် ညှိုဖို့ ထွက်ကျကုန်ကြပေါ့
ဆက်လက်ဆိုညည်းနေဖို့ပါ.....။ ။ HNS(TG)
Posted by Cameron at 21:264comments:
ဒုတိယအကြိမ်သူမ သူ့ကို သတင်းကျွတ်လပြည့်ညက ရွှေတိဂုံဘုရားကုန်းတော်မှာ သူမတို့ပဉ္စဘောဓိအသင်း ဆီမီးတစ်ထောင်ပူဇော်ဖို့ မီးထွန်းညှိစဉ်ကဖြစ်သည်။ သူက တံမြက်စည်းလည်းအသင်းတစ်ခုက သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် အဖော်လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်..။ ဒီတစ်ခါသူက ရှပ်အကျီင်္ နံ့သာရောင်ကို ရခိုင်ပုဆိုးအုန်းခွံရောင်နှင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားသည်...။ သူမတို့ဆီမီးခွက်ကလေးတွေကို မီးထွန်းညှိရင်း သူမီးညှိသည့်ခွက်နှင့် သူမမီးညှိသောခွက်ကပ်လျက်ကလေး လာတိုက်တော့မှ သူရောကျမပါ ပြိုင်တူမော့ကြည့်မိကြသည်..။ သူ့မျက်ဝန်းဆီမှ သူမကိုမှတ်မိသော အရိပ်တန်းကလေးတစ်ခု ဖြတ်ပြေးသွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်...။ သူ သူမကိုစပြီးနှုတ်ဆက်ပါသည်..။ သူမတို့ဆီမီးထွန်းရင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မိတ်ဆက်ကြသည်..။ သူသမိုင်းအဓိကဖြင့်ကျောင်းပြီးထားပြီး လက်ရှိ ဂျာမန်သံရုံးတွင် အလုပ်လုပ်ပါသည်..။ သူမတို့ BC စာကြည့်တိုက်တွင် စာအုပ်လာငှားတတ်ကြောင်း ပြောပြသည်..။ သို့သော် သူမ သူ့ကိုမဆုံဖူးခဲ့ပါ..။ သူမအလုပ်ဝင်တာ သိပ်မကြာသေးတာလည်းပါမည်..။
အနီးကပ်တွေ့တော့မှ သူမပိုသတိထားမိသွားတာ..သူ့မျက်လုံးလေးတွေက ဗာဒံသီးပုံရှည်လျား မည်းနက်နေ၏။ မျက်တောင်တွေကခပ်တိုတိုပေမယ့် မည်းနက်သောကြောင့် မျက်လုံးအင်အားကောင်းသည်..။ ပြုံးလိုက်လျှင် မေးစေ့မှာ အချိုင့်ကလေးပေါ်လာလျက် ချစ်ခင်နှစ်သက်စဖွယ်ဖြစ်သွားသည်။ သူ့သွားတွေက ဖြူဖွေးတောက်ပလေသည်။ ထိုညမှာ လပြည့်လသည် ၀င်းထိန်သာလျက် သူမတို့အသင်းတွေဘုရားပေါ်မှာပဲ အိပ်ကြတာမို့ တစ်ညလုံး ဘုရားအတူဖူးရင်း သူမ မသိသေးးသည့် ဘုရားသမိုင်းကြောင်းများကိုလည်း သူစိတ်ရှည်စွာပင် ရှင်းပြပါသည်...။ နက်ပြာရောင်ကောင်းကင်မှ လပြည့်လကို မော့ကြည့်ရင်း... သူမတိတ်တဆိတ် ကျေးဇူးတင်နေမိသည်ကိုတော့ သူကြားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ...။
သူမတို့ခင်မင်ရင်းနီးပြီး တစ်နှစ်ကျော်မှာ သူမကို သူချစ်ခွင့်ပန်ပါသည်...။ သူမကိုချစ်စကားပြောသော နေရာကလေးသည် မထင်မှတ်ဘဲ သာယာလှပတဲ့ ကမ်းခြေလေးတစ်ခုမှာဖြစ်တဲ့အပြင်... မီးပုံပွဲလုပ်ကြတဲ့...၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်းနေတဲ့ လပြည့်ညမှာဖြစ်ခဲ့သည်..။ သူမတို့ မီးပုံပွဲမှာတခဏ ကမ်းခြေဖက် လမ်းလျှောက်ကြရင်း သူမကိုဖွင့်ပြောခြင်းဖြစ်သည်..။ စာတွေထဲမှာဖတ်ဖူးတာမှန်သည်..။ မင်းယောကျာင်္းရဲမက်တွေဟာ...စစ်မြေပြင်မှာ ဘယ်လောက်ပင် ရဲစွမ်းသတ္တိရှိစေကာမူ... သူတို့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ မိန်းကလေးရှေ့မှာတော့ အလိုလို ယုန်သူငယ်လေးလိုပဲ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေတတ်တော့သည်...။ သူမထက်အသက်နှစ်နှစ်ငယ်သော ထိုလူငယ်ကလေးမှာ သူမကို ရည်းစားစကား မရဲတရဲစပြောခဲ့ပါသည်...။
သူမတို့သောင်ပြင်မှာအတူထိုင်ပြီး ကောင်းကင်မှ ကြယ်ကလေးများကိုမော့ကြည့်မိကြသည်...။ လမင်းကြီးရယ်..ဒီတစ်ခါလည်းသူမကို ကြည်နူးခြင်းတွေဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပြန်ပြီ..။
သူမတို့ချစ်သူသက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မှာပဲ...သူ ဧည့်သည်များနှင့် အထက်မြန်မာပြည်သို့ခရီးထွက်ရင်း ကားအက်ဆီးဒင့်နှင့် ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါသည်...။ သူမဘ၀နေသားကျနေပြီးခါမှ...မထင်မှတ်ဘဲ ကြယ်ကလေးတစ်ပွင့်...ရောက်လာခဲ့ပါသည်...။ သို့သော်...ထိုကြယ်ပွင့်ကလေးကို သူမခူးဆွတ် ရလာခြင်းမျိုးမဟုတ်...။ သူမရှေ့မှာ လင်းခနဲ တခဏကြွေကျသွားခဲ့တာပါ...။ ထိုချိန် သူမလိုရာဆုတောင်းခဲ့မိလို့...သူမကို အိပ်မက်လှလှ လာပေးသွားခဲ့တာပါ...။ အထီးကျန်ဆန်တဲ့သူမကို လာနှစ်သိမ့်သွားခဲ့တာပါ...။
လပြည့်လရယ်...ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူမဘ၀ကလေးကိုတော့ ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရာလေး ဖန်ဆင်းပေး သွားတဲ့အတွက် သူမကတော့ ကျေးဇူးတင်နေတော့မှာပါ....
ဆရာမဂျူး၏ “မိန်းမတစ်ယောက်၏ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်”မှ ကိုးကားပါသည်။
Posted by Cameron at 08:302comments:
စာတန်းခေါင်းစဉ်မှာ “မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတောင်ပေါ်လူမျိုးစုများ (The Hill Tribes of Northern East Myanmar)” အကြောင်းဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးမည့်သူအမည်မှာ ဦးမင်းညိုစင် ဟုရေးထားသည်..။ သူ့နာမည်နှင့် သူအလွန်လိုက်ဖက်ပါသည်..။ သူပြောပြသည့် လူမျိုးထဲတွင် လားဟူ ၊ လီဆူးလူမျိုးများ အကြောင်း ကျမကြားဖူးသော်လည်း အခါလူမျိုးကိုတော့ ကျမ မကြားဖူးပေ..။ သူ၏တင်ပြချက်များ ပြီးဆုံးသွားလျှင် ကျမတို့ ပရိတ်ထဲမှ စိတ်ဝင်စားသူ မရှင်းလင်းသူများ ၊ ပိုသိလိုသူများက သူ့ကိုမေးမြန်း ဆွေးနွေးနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ဤလူငယ်ကလေးကို နည်းနည်းတော့ ဒုက္ခပေးလိုက်ဦးမည်ဟု ကျမစဉ်းစား၏။
တောင်ပေါ်လူမျိုးများ၏ “အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ကလေးမွေးဖွားခြင်း ခေါင်စဉ်အောက်မှာ သူပြောသွားသော လင်မယား ကွဲကွာခြင်းဟူသော စကားကို ကျမသိပ်မကျေနပ်ပါ။ သူက များသောအားဖြင့်ဇနီး၏ ဖေါက်ပြားမှုကြောင့် အိမ်ထောင်ပြိုကွဲသည်ဟုဆိုသည်။ ထို “များသောအားဖြင့်” ကို အတိအကျ ကျမသိချင်သည်။ တခြားဆွေးနွေးသူများ ဤကိစ္စကိုမေးမြန်းမလားဟု ကျမစောင့်နေသေး၏ ။ ဘယ်သူမှ ထိုကိစ္စကိုထည့်မမေးတော့ ငါးယောက်မြောက်ဆွေးနွေးသူအဖြစ် ကျမ လက်ညိုးထောင်ပြလိုက်ပါသည်။
ကျမရှိရာသို့ လှမ်းကြည့်ပြီး သူမျက်ခုံးတချက်ပင့်လိုက်သည်..။ ကျမသတိထားလိုက်မိသလောက် သူစကားပြောလျှင် မျက်ခုံးပင့်ပင့်ပြီးပြောတတ်သည်။ ထိုချိန်မှာ မျက်လုံးများကပြုံး၍ လင်းလက်နေတတ်သည်..။
“When you described about the divorces of Hill Tribes you said the general cause is the adultery of the wife, didn't you?”
တောင်ပေါ်လူမျိုးတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ကွဲဖြင်းအကြောင်းရှင်ပြောခဲ့စဉ်က အများအားဖြင့် ဖြစ်တတ်သော အကြောင်းရင်းဟာ ဇနီးရဲ့ဖောက်ပြားမှုလို့ ရှင်ဆွေးနွေးသွားတယ် မဟုတ်လား...
“So do you mean the adultery of the husbands are fewer than those of the wives?”
ဒါဖြင့် ခင်ပွန်းရဲ့ ဖောက်ပြန်မှုက ပိုနည်းတယ်လို့ ရှင်ဆိုလိုတာလားဟုမေးလိုက်သောအခါ ကျမဘာကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်သွားကြောင်းသူသိသွားပါသည်..။
“Although I used the word "generally", I did not mean the adulteries of the wives are greater in ratio than those of the husbands”
ယေဘုယျအားဖြစ်လို့ ကျတော်သုံးနှုန်းလိုက်ပေမယ့် ဇနီးရဲ့ဖောက်ပြန်မှုအချိုးက ခင်ပွန်းရဲ့ဖောက်ပြန်မှု အချိုးထက်များတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး..။
နားထောင်နေသော ပရိတ်သတ်က သဘောကျစွာ ပြုံးရယ်ကြလေသည်။ ထိုအခါ သူက အနည်းငယ်ပြုံးလိုက်၏။
Most of then obey the Principle of Monogamy but the husband may have more than one wive, Even this is not the cause of divorce.
သူတို့ဆီမှာ အများအားဖြင့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ဖြစ်မယ်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်ခင်ပွန်းတစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ထက်ပိုတဲ့ ဇနီးတွေရှိတတ်ပါတယ်..။
Sometimes they divorce the wives because of not having the eldest son but it does not increase the rate of divorce because the husband in this circumstance may get another wife without divorcing the first.
“ သားဦး ယောကျာင်္းလေး မမွေးနိုင်ရင်လဲ အိမ်ထောင်ကွဲတတ်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းရင်းကြောင့်လဲ အိမ်ထောင်ကွဲခြင်း အချိုးအဆ တက်မလာပါဘူး..။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခင်ပွန်းဟာ ပထမဇနီးကိုမကွာဘဲ နောက်ဇနီးတစ်ယောက်ကိုယူနိုင်လို့ပါပဲ..”
ကျမနောက်မှ ယောကျာင်္းလေးတချို့ ခပ်အုပ်အုပ်ရယ်မောလိုက်သံကြားရသည်။
“The main cause is the adultery of the wife....I ..I mean”
“No, no, I see. Thank you very much”.
Posted by Cameron at 01:40 No comments:
အေ၇းပေါ်(A)သွေးလိုလို့ပါ .. ဘုန်းကြီးလမ်းထိပ်က ဂျပန်ဆေးရုံ ကြီးမှာတင်ထားရတဲ့
ကျေးဇူးပြုပြီး .. ကူညီပေးကြပါ.. 095019247 (ဒေါ်စန်းစန်းယု) ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမက်ဆေ့လေးကို ဆက်ပြီး လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါလို့ အနူးအညွှတ်တောင်းဆိုပါတယ်..။
Posted by Cameron at 05:13 No comments:
တစ်ခါက လပြည့်လသည် သူမဘ၀ကို အမှတ်တရများစွာ ထင်ကျန်စေခဲ့သော ညများကို ဖန်းဆင်းပေး ခဲ့ဖူးပါသည်..။
ငယ်စဉ်က ကုက္ကိုတန်းရွာမှာ သူမမိဘများဆုံးပါးသွားတော့ သူမအသက် ခြောက်နှစ်ပင်မပြည့်သေးပါ...။ တစ်ဦးတည်း တစ်ကောင်ကြွက်သူမကို အဖေ့ညီမ အဒေါ်ဖြစ်သူက ကျွေးမွေးထားခဲ့ပါသည်..။ အဒေါ်ကလည်း အိမ်ထောင်မရှိ တစ်ကိုယ်တည်းသမား...။ ဈေးထဲ ကုန်စိမ်းများရောင်း၍ သူမကို ကျောင်းထားပေးပါသည်...။ သူမတို့ ရွာဦးကျောင်းမှာ တိုင်ဆောင်မုန်းလရောက်လျှင် ဘုရားပွဲကို ကြက်ပျံမကျ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပလေ့ရှိသည်...။
သူမကတော့ ပွဲကြိုက်သူမဟုတ်တာမို့ (ရွာမှာရှားပါးလေးပေါ့) တိုင်ဆောင်တိုင်လပြည့်ည လမင်းကြီး ထိန်ထိန်သာ နေချိန်မှာ သူငယ်ချင်းများနှင့် ထုတ်စည်းတိုးတမ်း၊ ဂုံညင်းဒိုးပစ်တမ်း၊ အိမ်ကြီးအိမ်ငယ်တမ်း ကစားရတာကိုပို၍ နှစ်သက်ပါသည်။ တစ်ခါမြို့ကနေအဒေါ် ၀ယ်လာပေးဖူးသော သွပ်နန်းကြိုးနှင့် ယမ်းများသုတ်လိမ်းထားသည့် မီးရှူးမီးပန်းများကို ကစားရတာအလွန်ပျော်ပါသည်..။ ကျောင်းသွားလျှင် စီးရသော စက်ဘီးကလေး၏ နောက်ထိုင်ခုံတန်းတွင် မီးပန်းများကိုချိပ်လျက် မီးရှို့ပြီး စက်ဘီးနင်းရသော အရသာသည် လူအများကြိုက် ဇာတ်ပွဲနှင့်တော့မလဲနိုင်ပါ။ ပြီးတော့ ကုက္ကိုပင်ကြီးဆီ သွပ်နန်းကိုကွေး၍ မီးပန်းများကို ပစ်တင်ပြီး အပင်မှာချိပ်ဆွဲလျက် မီးပန်းများဖွားကနဲ ဖွားကနဲ လင်းနေသည်ကို ကြည့်ကြပြီး သူမတို့ ကလေးတစ်စုပျော်ရွှင်စွာ လက်ခုတ်တီးသေးသည်။ ဤသည်မှာ သူမကလေးဘ၀က လပြည့်လများကို နှစ်သက်တတ်ခဲ့သည်များဖြစ်သည်။
ခေါင်းရင်းပြူတင်းပေါက်မှ လရောင်တချို့...ကုတင်ပေါ်ပြန့်ကျဲနေသော သူမဆံပင်များဆီသို့ ဖြာဆင်းကျနေသည်။ တချိန်က ဒီလပြည့်လ အလင်းရောင်တွေက သူမဘ၀ကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေခဲ့တာ အမှန်ပင်..။ ခုတော့...သူမစိတ်တွေနွမ်းလျနေသည်...။ ဒီနေ့တနေကုန်သူမ စိတ်ရောလူရောအပင်ပန်းဆုံးနေ့...။ ခုအိပ်ချိန်မှသာ နားစက်လှဲလျောင်းရတော့သည်..။ ခါတိုင်း သူမ ဘယ်လောက်ပင် ပင်ပန်းပါစေ လရောင်ခြည်က သူမစိတ်ကို အေးမြလန်းဆန်းစေမြဲပါ...။ ခုတစ်ခါ လပြည့်လကတော့ သူမ၏နွမ်းနယ်မှုကို မကုစာပေးနိုင်တော့အောင် ကံကြမ္မာရဲ့ လှည့်ကွက်က မျက်စိတစ်မှိတ်ဆိုသလိုပါပဲ...။
ငယ်စဉ်ကတည်းက တစ်ကောင်ကြွက်ဘ၀နှင့် ကြီးပြင်းခဲ့သော သူမအဖို့... မောင်သည်သာလျှင် အားကိုးအားထားရာ မဟုတ်ပါလား...။ ခုတော့ သူမဘ၀ထဲကရော လောကကြီးကိုပါ အပြီးပိုင်နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီ..။ အထီးကျန်ဆန်သောဘ၀ဖြင့်နေခဲ့တာ သူမအတွက် နေသားကျနေပါပြီးမှ...“မောင်” ဆိုတဲ့ ချစ်စရာကောင်းသော လူသားကလေးတစ်ယောက်သည် သူမဘ၀အား နူးညံ့နွေးထွေးသော ကြိုးမျှင်များဖြင့် ချည်နှောင်ကာ ထားရစ်ခဲ့လေပြီ...။
သူမသည် သံရုံးစာကြည့်တိုက်တွင် အလုပ်လုပ်ရင်း သူမ၀ါသနာပါသော စာပေကိုလည်း တစ်ဘက်က လေ့လာကာ ၀တ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာ စသဖြင့်ရေးသားပြီး စာအုပ်တိုက်သို့ ပို့လေ့ရှိသည်..။ ခုခေတ် ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းအတော်များများမှာ သူမရေးသည့် နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဆောင်းပါးများ၊ ကဗျာနှင့် ၀တ္ထုတိုများ နေရာယူနေပြီ...။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်လဲ တော်တော်ပင်ရနေပါပြီ..။
သူမနှင့် မောင်ဆုံတွေ့ပုံလေးကို ပြောပြချင်ပါသည်...။ ထိုနေ့က Strand Hotel စာတန်းဖတ်ပွဲသို့ သူမတက်ရောက်လာခဲ့သည်..။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မဂ္ဂဇင်းတိုက်အတွက် ကုန်ကြမ်းရှာထွက်တာရယ်...သူမ မသိသေးသော အကြောင်းအရာများကိုလာ၍ နားထောင်ခြင်းပင်..။ ထိုနေ့က စင်ပေါ်တွင် လည်ကတုံး အဖြူအောက်ခံကို အနက်ရောင်တိုက်ပုံနှင့် မရမ်းရောင်အကွက်စိပ်ပုဆိုးကို တွဲဝတ်ဆင်ထားသော ထိုအမျိုးသား၏ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုသည် သူမကို ပထမဆုံး ဆွဲဆောင်လိုက်သည်...။ သူမ သက်တမ်းမှာ ထိုကဲ့သို့သော မြန်မာအမျိုးသားဝတ်စုံနှင့် အလွန်လိုက်ဖက်ကြည့်ကောင်းသော သန့်ပြန့်သော ယောကျာင်္းမျိုး မမြင်ဖူးခဲ့တာသေချာသည်...။ သူ၏ မျက်နှာကျပုံမှာ မေးရိုးခိုင်ခံ့စွာ ယောကျာင်္းပီသသော သဏ္ဍန်အပြင် ပါးပြင်မေးတလျှောက်မှ သပ်ရပ်စွာရိပ်ထားသော ပါးဒိုင်းမွှေး စိမ်းမြမြကိုလည်း မြင်နေရသည်။ သူအရပ်အမောင်းမှာ သူမခန့်မှန်းမိသလောက်တော့ ခြောက်ပေနီးပါးမြင့်မည်ထင်သည်..။ သူမအရပ် ငါးပေငါးနဲ့ဆို ခေါင်းတစ်လုံးစာလောက်မြင့်မည်...။ မြင်ရတာ ဟောလီးဝုမှ ပရက်ပစ်လိုလို အက်ရှတန်ကူချာတို့လိုမျိုး...။ သူမ၏ သုံးသပ်ထင်မြင်ချက်များကို အသာထား၍ စင်နှင့်နီးကပ်ရာသို့ သွားလိုက်သည်..။ ပါလာသောရစ်ကော်ဒါကိုဖွင့်ပြီး သူမစာအုပ်တစ်အုပ်နှင့် Hilight များကိုသီးသန့် မှတ်ယူပါသည်..။
Posted by Cameron at 23:48 No comments:
ဘာမှမရှိတော့ဘူး...။ ။ HNS(TG)
Posted by Cameron at 23:362comments:
ငါ ထာဝရရစ်ပတ်နိုင်ပါတယ်...။ ။ (အမည်မသိကဗျာဆရာ)
Posted by Cameron at 23:21 1 comment:
Posted by Cameron at 02:095comments:
မနေ့ညက “J” ဆိုတဲ့မြန်မာဗီတီယိုခွေလေး ကြည့်ဖြစ်တယ် ။ “ဂျေ”ဆိုတာ “Jealous” သ၀န်တိုတာကို ဆိုလိုတာပါ..။ အဲဒီကားကြည့်ရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုကို သွားအမှတ်ရမိတယ်...။ ခံစားမှုအဟောင်းက လတ်တလော ခံစားနေရတဲ့အတိုင်းပဲ ရင်ထဲစူးခနဲ နာကျင်သွားတယ်..။ ကျမသိပ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူ ကျမ မသိအောင် တိတ်တိတ်ကလေး ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ညှိစွန်းနေတဲ့ အဖြစ်ကလေးပါ။ ကျမချစ်သူကို ကျမသိပ်ချစ်ပါတယ် လိုလေသေးမရှိအောင်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ချစ်ခဲ့ရတာပါ...။ ခဲမှန်ဖူးတဲ့စာသူငယ်လိုပဲ သူကျမကို ထားသွားတာမျိုးကို သိပ်ကြောက်လွန်းလို့ ဘယ်ကောင်မလေးကြည့်တာမှ မခံချင်ခဲ့ဘူး..။ ကျမတို့တွဲသွားကြရင်တောင် ကောင်မလေးတွေ သူ့ကို ညုတုတုနဲ့ကြည့်ရင် ကျမကပြန်ပြီးရန်စွာလိုက်တာပဲ..။ ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် ကောင်မလေး တစ်ယောက်က ကျမကိုပြောသွားခဲ့ဖူးတယ်..။ “ဒီလောက်စိတ်မချဖြစ်နေရင်လဲ အိမ်မှာသော့ခတ်သိမ်းထားပေါ့” တဲ့..။
ကျမရဲ့ သ၀န်ကြောင်မှုကြောင့် ချစ်သူနဲ့ကျမ မကြာခဏစကားများကြရတယ်..။ ကျမကြောင့် သူ လူရှေ့သူရှေ့ အရှက်ကွဲ ရပေါင်းများတာပါဆိုပြီး သူကရှက်တယ်တဲ့..။ အင်းလေ...ကျမစဉ်စားကြည့်ဖူးတယ်..။ သူကျမခံစားချက်ကို နားမလည်တာ ကျမလောက်သူမချစ်လို့ပဲလား..။ ကျမချစ်သူက ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်...အပေါင်းအသင်းကလဲခုံမင်တယ် သူက..။ အဲဒီသူ့အပေါင်းအသင်းကြောင့်ပဲ သူတို့လှော်ပေးလို့ပဲ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သူညှိသွားခဲ့တယ်..။ ကျမချစ်သူ ဘယ်လောက်ထိ သတ္တိရှိသလဲဆိုရင် အဲဒီကောင်မလေးဆေးရုံတက်ရလို့ ကျမကိုခေါ်ပြီး သွားကြည့်ဖြစ်အောင်သွားသေးတယ်..။ ပထမတော့ သူက ကျမကိုခေါ်တော့ ကျမ မလိုက်ဘူးငြင်းခဲ့တယ်..။ သူက မကောင်းပါဘူး လူမှုရေးအရ သွားကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ ကျမလဲ လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်..။ အဲဒီကောင်မလေးကသူတို့ Marketing ဆင်းတော့ သူတို့လိုတခြား ကုမ္ပဏီက ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ပါပဲ..။ လုပ်ငန်းခွင်က သူငယ်ချင်းတွေလို့တော့ပြောကြတာပဲ..။
တကယ်တမ်း...ဆေးရုံမှာ ကျမမျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်လိုက်ရမှပဲ ကျမတော်တော်ညံ့ဖျင်းတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့တော့တယ်..။ အဖြစ်ကဒီလိုပါ..။ ကောင်မလေးက အဆုတ်ထဲ အကျိတ်ပေါက်တာ ဗိုက်ခဏခဏ အောင့်နေတာ ဆရာဝန်ကခွဲထုတ်မှရမယ်ဆိုလို့ ဆေးရုံတက်ခွဲလိုကရတာ..။ သူခွဲစိတ်ခန်းဝင်တော့ သူ့မိသားစုဝင်တွေကို တစ်ယောက်မှ မတွေ့ရပါဘူး..။ ကျမနဲ့ချစ်သူနဲ့ပဲ ထိုင်စောင့်နေကြတာ..။ ခဏနေတော့ Nurse တစ်ယောက်က Operation ခန်းထဲကထွက်လာပြီး ခွဲထုတ်ထားတဲ့ အကျိတ်လုံးတွေကို Tray ထဲထည့်ပြီး ကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုလာပြတယ်..။ ကျမတို့ကို မိသားစုဝင်တွေလို့ထင်နေပုံရတယ်..။ ကျမတို့လဲ သွားကြည့်လိုက်ပါတယ်...။ ခဏကြာမှာ ကောင်မလေးရဲ့ မိဘတွေရောက်လာတယ်..။ ကောင်မလေး ခွဲစိတ်ခန်းထဲက ထွက်လာတော့ သူ့အခန်းထဲကိုကျမတို့ လိုက်ဝင်သွားကြတယ်..။ ဘယ်လောက် အံ့သြစရာကောင်းသလဲ...။ မေ့ဆေးပေးပြီး ခွဲစိတ်ခံထားရတဲ့ လူနာတစ်ယောက်က သူမေ့ဆေးပြယ်တော့ ပထမဦးဆုံး သူ့အမေကို မခေါ်ဘဲ... ကျမချစ်သူနာမည်ကို အရင်ခေါ်သတဲ့..။ အဲဒါနဲ့ ကျမလဲ ဟိုမှာခေါ်နေတယ် သွားလိုက်ဦးဆိုတော့ ကျမချစ်သူက လူနာကုတင်ဘေး ခုံတန်းမှာ သွားထိုင်လိုက်ပါတယ်..။ ကျမက ကောင်မလေးအမေနဲ့ စကားပြောနေရင် သူတို့ကို လှမ်းလှမ်းကြည့် ပါတယ်..။
ကြည့်စမ်းပါဦး မေ့ဆေးပြယ်ခါစ လူနာတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးတွေကလဲ အီစီကလီအပြည့်နဲ့ပါလား..။ ကျမချစ်သူကလဲ ကောင်မလေးလက်ကို ဆုတ်ကိုင်အားပေးနေတယ်..။ အော်...ဒင်းက လက်ကိုင်ပြီးတောင်အားပေးတဲ့ အဆင့်ရောက်နေတာကိုး..။ ကောင်မလေးကလဲ ကျမချစ်သူဆံပင်ကို ပြန်သပ်ပေးနေတယ်...။ ဘုရားရေ....ဒါဘာအပြုအမူတွေလဲ... ကျမထပြီး သောင်းကျန်းချင်စိတ်ကို မနဲမြိုသိပ် ထားရတယ်...။ ကျမတစ်ယောက်လုံး ဘေးနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကို ဒင်းတို့က မေ့နေကြတယ် ပေါ့လေ..။ အံမယ်...ကောင်မလေးကပြောသေးတယ်..အသံခပ်တိမ်တိမ်နဲ့ “မောင့်အမကိုအားနာစရာ”တဲ့..။ အော်...သူက ကျမကို သူ့အမလို့ကောင်မလေးကိုလိမ်ထားပုံရတယ်..။ တွေ့မယ်...။ ကျမချစ်သူ..အရင်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး..။ သူ့အပေါင်းအသင်းတွေမြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်တာနဲ့ပဲ သူကလိုက်မြောက်နေတယ်..။ အင်းလေ...ဒါကလဲ သူပါမှဖြစ်တာပါ..။ ကောင်မလေးက သူ့ကို“မောင်”လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်တောင်ရောက်နေပြီ..။
အပြန်ကျမတို့ ကားပေါ်မှာ နှုတ်ပိတ်ပြီးပြန်လာကြတယ်..။။ ကျမအရမ်းကို စိတ်ဆိုးနေပြီ ပေါက်ကွဲချင်နေပြီ...။ မျက်နှာကိုလဲ မီးကုန်ယမ်းကုန် စူပုပ်ထားတယ်..။ ကျမချစ်သူက သိနေတယ် ကျမကို စကားလုံးဝမစဘဲ တိတ်နေတယ်..။ သူ့အပြစ်သူသိနေပြီလေ..။ အဲဒီညနေက သူတို့မန်နေဂျာကသူ့အိမ်မှာ New Year Eve ဖိတ်ထားတာကို တခါတည်းအိမ်မပြန်တော့ဘဲ သွားလိုက်တယ်..။ ဟိုရောက်ရင်လဲ ပျော်မှာမဟုတ်ဘူး..။ ကျမစိတ်တွေက ရှုပ်ထွေးနေပြီ..။ တကယ်လဲ အဲဒီအိမ်ရောက်တော့ မီးကလဲပျက်နေတယ်..စားစရာလဲ ဘာမှမစီစဉ်ထားဘူးတဲ့..။ ဒါဆို ဘာလို့ဖိတ်ထားကြသေးလဲ...။ သိပ်စိတ်တိုဖို့ကောင်းတယ်..။ ဖယောင်းတိုင်မီးမှောင်ထဲမှာ ဒေါသကို မြိုချပြီး ထိုင်နေလိုက်တယ်..။ သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့သူက ၀ရံတာထွက်ပြီး တီးတိုးတီးတိုးနဲ့ပြောနေကြတယ်..။ ကျမတို့နှစ်ယောက် ပြဿနာတစ်ခုခု တက်လာမှန်းရိပ်မိနေမှာပါ..။
အဲဒီသူငယ်ချင်းကိုပဲ ကျမ မကြိုက်တာ သူလှော်ပေးလို့ ခုလိုဖြစ်တာလဲပါတယ်..။ ပြီးတော့ ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြား ခလောက်ဆန်သွားသေးတယ် ယောက်ကျားတန်မဲ့နဲ့..။ ကျမရဲ့လွှမ်းမိုးမှု အောက်မှာနေမနေနဲ့ တဲ့..။ သူချုပ်နှောင်ထားတဲ့ဘ၀မှာ မင်းပျော်နေသလားတဲ့..။ ဒီတိုင်းဆို မင်းဘ၀ သူ့ရဲ့ချုပ်ချယ်မှု လွှမ်းမိုးမှုအောက်က ဘယ်တော့မှာ လွတ်မြောက်မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့...။ ဒါ...သူပြောစရာလား...ကျမလေ အဲဒီသူ့သူငယ်ချင်းမျက်နှာကို ကုတ်ဖဲ့ပစ်လိုက်ချင်တယ်..။ ကျမတို့ချစ်သူ နှစ်ယောက်ကို သူသက်သက် ကွဲအောင်လုပ်နေတာ...မနာလိုဖြစ်နေတာ...။
Posted by Cameron at 01:45 1 comment:
Posted by Cameron at 05:112comments:
အလှူရှင်ကို ရှာတွေ့ဖို့တွက် တတ်နိုင်သမျှ ကုသိုလ် ယူလိုက်တဲ့ သဘောပါ
please forward this news to your friends
We needablood donor urgently. The blood type is AB.
the one who suffering from leukemia is Kit Kit (11 yr old)
if you found one .. pls contact Ma Aye Aye Myint (mother)
( 01-586672 ).
ကျမ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက မေးလ်ဝင်လာလို့ အကူအညီတောင်းတာပါ...။ နီးစပ်ရာ ဘလောက်မောင်နှမများ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များ အသိရှိရင် ဒါမဟုတ် ကိုယ်တိုင်လှူချင်ရင် အထက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ကို အမြန်ဆုံးဆက်သွယ် ပေးစေလိုပါတယ်...။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
Posted by Cameron at 05:283comments:
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က ကျောင်းပြေးရတာကို သိပ်ခေတ်စားကြတယ်...။ ရန်ကုန်ကျောင်းလာတက်တော့ ဒီက မြို့ကလေးတွေက ကျောင်းပြေးတာသိပ်မတွေ့ရဘူးဗျ...။ အင်းလေ......ဆယ်တန်းအထိ ကျောင်းတက်တော့လဲ မိဘတွေအကြိုအပို့နဲ့ ကျောင်းကားနဲ့လာတဲ့သူကများတော့ ကျောင်းပြေးဖို့အခွင့်အရေးက နည်းတယ်လေ...။ ကျွန်မတို့တောမှာကျတော့ ဘယ်အဖေအမေကမှ လိုက်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး..။ မနက်ကျောင်းသွားမယ် နေ့လည်ထမင်းစားချိန် အိမ်မှာထမင်းပြန်စားကြမယ်...။ အဲ...အဲဒီမှာအခွင့်အရေးပဲပေါ့ ကျောင်းပြေးဖို့က...။
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်မတို့တက်ခဲ့တဲ့ အ.လ.က(၁)ကျောင်းဝင်း ပတ်ပတ်လည်က ၀န်းကျင်လေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်...ကျွန်မတို့ကျောင်းကရွာရဲ့ နောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိပါတယ်...။ ကျောင်းရဲ့ညာဘက်မှာ ငါးကန်တွေရှိတယ်.. အဲဒီ ငါးကန်းနောက်မှာက နန်းဖေါင်းတို့အဘိုးရဲ့ မက်မန်းသီးခြံ..။ ကျောင်းဘယ်ဘက်မှာက တာလေးချောင်း ... ချောင်းကမ်းပါးအနီးမှာတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေနေတဲ့ အိမ်တန်းလျားရှိပါတယ်...။ အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာက... လယ်ကွင်းပြင် ...။ အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုလဲအဓိကပါတာပေါ့ ကျောင်းပြေးရတဲ့အကြောင်းအရင်းက...။ ကျောင်းပြေးပြီး ဘယ်တွေသွား ဘာတွေလုပ်ကြသလဲဆိုတော့...။ ငါးကန်ထဲမှာ ပုဇွန်လေးတွေသွားဖမ်းကြတယ်...။ ကြာပန်းတွေခူးပြီး ဆွဲကြိုးလုပ်ဝတ်ကြတယ်...။ အဲဒီကြာကန်ထဲမှာ ကျွဲခေါင်းသီးလဲသီးတော့ ခူးစားကြပါသေးတယ်...။ နောက် နန်းဖေါင်းတို့အဘိုးခြံမှာ မက်မန်းသီးအစိမ်းတွေခူးပြီး ပဲပုပ်နဲ့ထောင်းစားကြတယ်( သရေတောင်ကျလာပြီးP ) ...။
အဆိုးဆုံးဗျာ...ကျောင်းနောက်ဘက်က လယ်ကွင်းထဲသွားပြီး စပါးမပျိုးရသေးခင် ရေအိုင်လေးတွေရှိရင် ငါးဖမ်းကြတယ် လယ်ပုဇွန်လုံးတွေနှိုက်ကြတယ်...။ ပျော်စရာကြီးဗျ...။ ပြန်လာရင် ဆရာမကိုမျက်နှာလုပ်ပြီး ပါလာတဲ့ငါးတွေကို ဟင်းချက်စားဖို့ပေးခဲ့သေးတယ်...။ အဲဒီတုန်းက ဆရာမဒေါ်ခင်ဖြူဝေမရောက်သေးလို့ ..။ မဟုတ်ရင်တော့ ကြက်ဥကြိမ်စာအမိပဲ...။ အဲဒီလယ်ကွင်းကို နည်းနည်းဆက်သွားရင် ဆင်ပုံစံကျောက်တုံးကြီးတွေရှိတယ်...။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေက ဟိုးအရင်ခေတ်ကတည်းက ရှိနေတာ...။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး ...ငယ်ငယ်ကတော့ ပြောကြတာပဲ ...အဲဒီဆင်ကျောက်တုံးဘေးက ကျောက်တုံးသေးသေးလေးတွေက သူမွေးထားတဲ့ ကလေးလေးတွေတဲ့...။ နောက်တစ်ခါသွားရင် ထပ်တိုးလာတဲ့ ကျောက်တုံးလေးတွေက ဆင်မကျောက်တုံးကြီးကမွေးတာလို့မှတ်ကြတယ်...။
တစ်ခါက အဲဒီကျောင်းနောက်ဘက် လယ်ကွင်းနဲ့ကျောင်းကြားမှာ တာလေချောင်း ထဲကိုစီးဝင်သွားတဲ့ စမ်းချောင်းအသေးလေးတစ်ခုရှိတယ်...။ အဲဒီချောင်းထဲမှာ ငါးဖမ်းတဲ့ဇကာနဲ့ ငါးတွေဖမ်းပြီး ကုန်းပေါ်တက်လာတော့ ခြေခလည်နဲ့ခြေသူကြွယ်ကြားမှာ ပျော့စိစိနဲ့ဘာပါလိမ့်လို့ကြည့်လိုက်တာ မျှော့ကြီးတော့.... အဲ ဟုတ်ဘူး ...မျှော့မဟုတ်ဘူး...။ ကျွတ်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ် အကောင်းသိပ်မကြီးဘူး...။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်.....ကျမက အဲလိုပျော့စိစိအကောင်မှန်သမျှ အကုန်ကြောက်တယ်.....။ (အဲ အားနည်းချက်တွေသိကုန်ပြီ)... ။ မျှော့တို့ ကျွတ်တို့ တီကောင်တို့ဆိုတာ ဆားကြောက်တယ်လေ...။ အဲဒီတော့ သူငယ်ချင်းက တံတွေးနဲ့ထွေးလိုက် ပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ လုပ်ကြည့်လိုက်တာ...။ တကယ်ဟုတ်တယ်ဗျ...။ စမ်းချောင်းထဲက ရေစိမ်နေတဲ့ ကျွဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဘုရားရေ...ကျွဲမျှော့ဆိုတာ အဲဒါပဲ... ကျွဲကြီးရဲ့ကျောပြင်မှာ မျှော့တွေများ ဘယ်လောက်တောင် သွေးစုပ်ထားကြလဲတော့မသိဘူး မဲနက်ဖေါင်းကားနေကြတာ အသည်းယားစရာပါပဲ....။
အားနည်းချက်ကို သိလက်စနဲ့တော့ တစ်ခုလောက်ပြောပြရဦးမယ်...။ ကျွန်မတို့ရွာက လမ်းတစ်လျှောက်ဟိုဘက် ဒီဘက် ကုက္ကိုပင်တန်းကြီးရှိတယ်လေ...။ နွေဦးပေါက်ဆိုရင် သစ်ပင်ကနေ ခူယားကောင်တွေ တွဲလောင်းကျနေတာ မနည်းရှောင်သွားရတယ်...။ ခူယားအမွေးအသားနဲ့ထိရင် အနီပြင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီး ယားလာရင် ဆန်စေ့ကိုဝါးပြီးလိမ်းရတယ်တယ်...။ ဒါကတော့ တောဓလေ့ဆေးမြီးတိုလေးပေါ့...။ မယားတဲ့ခူကောင်တွေလည်းရှိသေးတယ် ..။ သူက အကောင်နည်းနည်းကြီးပြီး အမွေးထူထူနဲ့ မဲနက်နေတာ ..အဖြူရောင်ဆွတ်ဆွတ်လည်း ရှိတတ်သေးတယ်...။ အတန်းထဲမှာ ကျောင်းသားတချို့ အဲဒီခူကောင်က ကိုင်လာဆော့လို့ကတော့ ကျွန်မအတန်းထဲကိုလုံးဝမ၀င်တော့ဘူး... အဲဒီလိုကြောက်တာ...။ ကျွန်မတို့ အိမ်နောက်ဖေး ရေအိမ်ရှေ့က အဘွားစိုက်ထားတဲ့ သရက်ပင်ကမရှင်နိုင်တော့လို့ တစ်ပင်လုံးလဲ ခူးယားကောင်တွေ မြင်ရက်စရာမရှိအပြည့်ပေါ့...။ အဲဒီအပင်က ခူကောင်တွေက အိမ်သာထဲရော အိမ်သာတံခါးမှာရော လက်ကိုင်မှာရော...နေရာအပြည့်ယူထားလိုက်ကြတာ...။ ကျွန်မလုံးဝအိမ်မှာ အိမ်သာမတက်တော့ဘူး...။ ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ နန်းဖေါင်းတို့အိမ်ကို စက်ဘီးနဲ့ အိမ်သာသွားတက်ရတယ်...။ တကယ်ပါပဲ...။
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က ဆော့ခဲ့ကြ ကဲခဲ့ကြတာ တော်တော်ပါပဲ...။ တာလေချောင်းဆိုလဲ နေ့တိုင်းလိုလိုကို ရေသွားကူးကြတာ...။ အဲလို နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် ရေသွားသွားကူးလွန်းလို့ ငယ်ငယ်ကဆို အသားမည်းနေရောပဲ.... ရုပ်က ကုလားဆင်ဆိုတော့ ကျွန်မကိုဆို ကုလားမ...(အီကုလား) လို့ရှမ်းလိုခေါ်ခေါ်ကြတယ်...။ ချောင်းထဲမှာ လုံချည်တွေကိုပူပေါင်းလုပ်ပြီး ရေးစီးအတိုင်းမျောပါပြီး ဆော့ကြတယ်...။ ကမ်းပါးကနေ ဒိုင်ပင်ထိုးချတယ်...။ ရေထဲမျောလာတဲ့ သဖန်းသီးတွေလဲ လုကောက်ကြတယ်...။ အင်း...သဖန်းသီးဆိုလို့ ကျွန်မတို့ တာလေရွာရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောပြချင်သေးတယ်...။ “တာ” ဆိုတာက ဆိပ်ကိုခေါ်တာ “လေ”ကတော့သဖန်းသီး ကိုပြောတာ...။ အဲဒီချောင်းရဲ့အရင်းမြစ်အစမှာ သဖန်းပင်တွေသိပ်ပေါတာတဲ့...။ အဲဒါကြောင့် “သဖန်းဆိပ်”ချောင်းလို့ ခေါ်ကြတာ...။ သဖန်းပင်ကနေ အသီးတွေကြွေပြီး မျောမျောလာတတ်တာပေါ့...။
ရွာမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းခဲ့တာကို ကျွန်မတော့ သိပ်သဘောကျတယ်...။ ဆော့စရာတွေက မကုန်ခမ်းနိုင်ဘူး...။ မြို့မှာလို အိမ်ထဲပဲနေပြီး အရုပ်တွေ ဂိမ်းတွေနဲ့ မကြီးပြင်းခဲ့ရတာကိုပဲကျေးဇူးတင်တယ်...အဖေနဲ့အမေကို..။ မြေကြီးတွေ သဲတွေနဲ့ သဘာဝကျကျ ကစားရတော့... ပထ၀ီဓါတ်ချို့တဲ့မှု လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့...။ သင်္ကြန်နားနီးရင်လဲ ပုစဉ်းရင်ကွဲတွေကို အပြိုင်အဆိုင်ဖမ်းကြသေးတယ်...။ ၀ါးလုံးပိန်ပိန်ရှည်ရှည်ထိပ်ဖျားမှာ ပိန္နဲစေးတွေသုတ်ပြီး ပုစဉ်းတွေကို လိုက်ကပ်ကြတယ်....။ ဒီနေ့တော့ဖြင့် ဘယ်သူအကောင် ဘယ်နှစ်ဆယ်ရလဲဆိုပြီး ပြန်လာရင် ပြောကြသေးတယ်...။ ပုစဉ်းရင်ကွဲအော်တဲ့ အသံကိုတော့ ကြားဖူးကြမှာပါ...။ အဲဒီချိန်မှာဆို ကျွန်မတို့အိမ်နောက်ဘက်က သရက်ခြံထဲမှာတင် ဆူညံနေရော...။ ပုစဉ်းရင်ကွဲမှာအူမပါပါဘူး...။ အူမရှိရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ သင်ခဲ့ဖူး ကြမှာပါ...။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ပုစဉ်းတွေကို အတောင်ဖြုတ်ပြီး ဖင်ကြားထဲ အချောင်းချောင်းလေးတွေ လှီးထားတဲ့ ဂျင်းချောင်းထိုးထည့်ပြီး ကြော်စားကြတယ်....။ တော်တော်တော့ ငရဲကြီးတဲ့လုပ်ရပ်ပဲဗျ...။ ငယ်ငယ်ကတော့မသိဘူးလေ...။ အပျော်အနေနဲ့ လုပ်ကြတာစုံလို့ပေါ့....။ ခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေတော့အဲလို ဖမ်းမဖမ်းမသိတော့ဘူး...။
Posted by Cameron at 03:34 1 comment: